Interviews – Eleven Media Group
Posted on September 12, 2018 by လင်းလင်းခိုင်
လတ်တလော ရုံတင်ပြသတော့မည့် ချူဆီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ အသက်ငယ်ရွယ်သော်လည်း မပြေလည်သည့် ဘ၀ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် ကေတီဗွီတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရသူ မိန်းကလေးတစ်ဦးအဖြစ် သရုပ်ဆောင် နန်းဆုဦးက ပါဝင်ထားသည်။ ပါဝင်ခွင့်ရသည့် ဇာတ်ရုပ်တိုင်းတွင် ပီပြင်စွာ ပုံဖော်တတ်သူတစ်ဦးအဖြစ် ပရိသတ် လက်ခံအားပေးမှု ရရှိထားသည့် သရုပ်ဆောင် နန်းဆုဦးက ချူဆီဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်ရသည့် ထိုက်ထိုက်ဇာတ်ရုပ်တွင်လည်း မည်ကဲ့သို့ ပုံဖော်ထားသည်ကို အကဲဖြတ်နိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။ သရုပ်ဆောင်နန်းဆုဦးနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ချူဆီဇာတ်ကား ရိုက်ကူးမှု အမှတ်တရများ၊ ပါဝင်ခွင့်ရသည့်ဇာတ်ရုပ်များတွင် စိတ်နှစ်ကြိုးစားမှုများအကြောင်း မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့သည်။
■ မေး – ချူဆီဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ – ချူဆီဇာတ်ကားမှာက ကေတီဗွီမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်။ ဘ၀ကအဆင်မပြေဘူး။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဘ၀ကို ရုန်းကန်နေရတဲ့ ကောင်မလေးနေရာက ပါဝင်ခဲ့တာပါ။
■ မေး – ဒီလိုဇာတ်ရုပ်မျိုးကို အရင်က သရုပ်ဆောင်ဖူးတာရှိလား။
ဖြေ – ဒီလိုဇာတ်လမ်း ဖရိန်မျိုးကိုတော့ အရင်က မရိုက်ခဲ့ဖူးဘူး။ ဒီကာရိုက်တာ အနေနဲ့လည်း အသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ညီမအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
■ မေး – ဒီလိုဇာတ်ရုပ်မျိုးမှာ အံဝင်အောင် သရုပ်ဆောင်တဲ့အခါ ဒီလိုမိန်းကလေးတွေရဲ့ဘ၀ကို လေ့လာဖြစ်ခဲ့တာမျိုးရှိလား။
ဖြေ – ဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးချိန်မှာ ကေတီဗွီမှာပဲနေတယ်။ ကေတီဗွီမှာ ရိုက်တာများတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု၊ အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေတင်မကဘဲ သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှု၊ ခံယူချက်၊ ဘ၀ရဲ့ အခက်အခဲ ဆိုတာတွေကိုလည်း သိခွင့်ရတယ်။ ကေတီဗွီမှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ဘ၀တွေနေရာမှာ ကိုယ်က၀င်ပြီး သရုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါ အများကြီး ပိုပြီးနားလည်သွားပါတယ်။
■ မေး – မင်းသမီးတွေ အများကြီးပါတဲ့ ဇာတ်ကားဆိုတော့ သူတို့နဲ့အမှတ်တရ ဖြစ်ရတာမျိုးရှိလား။ ရိုက်ကူးစဉ်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညှိနှိုင်းရတာမျိုးတွေရောရှိလား။
ဖြေ – ဒီကားထဲမှာ နန်းဆုရဲ့ စီနီယာအစ်မတွေပါတယ်။ အရမ်းလည်း ပျော်စရာကောင်းတယ်။ အစ်မတွေကလည်း သူတို့အတွေ့အကြုံတွေကို နန်းဆုတို့ကို မျှဝေတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပေးအယူမျှမျှ ရိုက်ခွင့်ရတာဆိုတော့ တကယ်ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်။
■ မေး – ဒီဇာတ်ကားက ကိုမင်းဦး ဒါရိုက်တာအဖြစ် ပထမဆုံးဖန်တီးတဲ့ကားဆိုတော့ ဒီအပေါ်မှာရော ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေ ရခဲ့လဲ။
ဖြေ – ဦးမင်းဦးက အရမ်းကို Flexible ဖြစ်တယ်။ အရမ်းလည်း Relax ဖြစ်တယ်။ တစ်ချိန်လုံး ရယ်မောပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်တယ်။ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ Serious တော့ ဖြစ်တယ်။ အိုက်တင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် သူ မကြိုက်မချင်း ပြန်လုပ်ခိုင်းတယ်။ ညီမတို့အတွက် တကယ့်ကို အဆင်ပြေပါတယ်။ အလုပ်ကိုသေချာ အာရုံစိုက်ပြီး ကြိုးစားရသလို အလုပ်ပြီးရင်လည်း စိတ်သက်သောင့်သက်သာနဲ့ နေခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ အမှတ်တရပါပဲ။
■ မေး – ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ဖက်ရှင်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင်ရော ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့လဲ။
ဖြေ – ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ၀တ်ဆင်ဖို့အတွက်ကတော့ ဇာတ်ညွှန်းဦးမိုးနီလွင်၊ ဦးမင်းဦးတို့နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ၀တ်ဆင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဓိကတော့ ကေတီဗွီမှာ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ကောင်မလေးတွေ ၀တ်ဆင်တတ်ကြတဲ့ပုံစံကို အဓိကထား ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
■ မေး – ကျော်ထက်အောင်နဲ့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံဆိုရင်ရော။
ဖြေ – ကိုကျော်ထက်အောင်က အိုက်တင်ပိုင်းမှာလည်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ နန်းဆုတို့အားလုံး အပေးအယူမျှမျှ လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
■ မေး – ချူဆီဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပရိသတ်ကို အကြိုပြောပြချင်တာများ ရှိမလား။
ဖြေ – ဒီဇာတ်ကားမှာ ညီမအနေနဲ့ကတော့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုပဲစိုးရိမ်တာက တချို့ Scene တွေမှာ လိုအပ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကြိုပြီးတောင်းပန်ထားချင်ပါတယ်။ ၁၄ ရက်နေ့ ရုံတင်တဲ့အခါ ဒီဇာတ်ကားမှာ နန်းဆုရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုအပေါ် ဝေဖန်မှုအားပေးမှု Feedback လေးတွေလည်း သိချင်ပါတယ်။
■ မေး – ဒီဇာတ်ကားက ပရိသတ်တွေအတွက် ဘယ်လိုရသမျိုး ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်လဲ။
ဖြေ – လက်ရှိရုံတင်နေတဲ့ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာတော့ ရသအသစ်တစ်မျိုး ထပ်ပေးနိုင်မယ့် ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
■ မေး – ဥပါဒါန်ဇာတ်ကားက ပုံမှန်ရိုက်ကူးနေကျ ဇာတ်လမ်းမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် ပရိသတ်အားပေးမှု များပြားခဲ့တယ်။ ဒီအပေါ်မှာ နန်းဆုဦးရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ – ဥပါဒါန်ဇာတ်ကားက ရိုက်ကူးစဉ်တုန်းကလည်း ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပညာပေးတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တော့ လွဲမှားလို့ရဘူး။ နန်းဆုပါဝင်ရတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကလည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိန်ခေါ်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတော့ ပရိသတ် အထင်အမြင် လွဲမှားစရာဖြစ်မှာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ တစ်ခုခုလေး လွဲချော်သွားမှာကို တကယ်စိတ်ပူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုံတင်ပြသတဲ့အချိန်တုန်းက ပရိသတ်တွေက အရမ်းအားပေးကြတယ်။ ဇာတ်ကားကပေးချင်တဲ့ Message လေးကိုလည်း သဘောကျကြတယ်ဆိုတော့ တကယ့်ကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ ဒီလို တန်ဖိုးရှိတဲ့၊ ပရိသတ်တွေအတွက် ဇာတ်ကားကြည့်ရင်းနဲ့ကို ထိုက်တန်တဲ့အတွေးလေးတစ်ခု လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်နိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် တကယ်ပျော်ရပါတယ်။
■ မေး – နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ – သစ္စာချည်တိုင် ဇာတ်လမ်းတွဲလေး ရိုက်နေပါတယ်။ ဒါပြီးသွားရင်လည်း နောက်ထပ်ဇာတ်ကားတွေ ကမ်းလှမ်းထားတာတော့ ရှိပါတယ်။ နန်းဆုပါဝင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလည်း ရုံတင်ဖို့တွေ ရှိပါတယ်။
■ မေး – နန်းဆုဦးဆိုရင် ဇာတ်ရုပ်တွေက တစ်ကားနဲ့တစ်ကား ကွဲပြားနေတာ အမြဲတမ်း တွေ့ရတယ်နော်။ ဇာတ်ရုပ်တွေကို ရွေးချယ်လက်ခံဖြစ်တာလား။
ဖြေ – အများအားဖြင့်တော့ နန်းဆုရိုက်ရတဲ့ ပုံစံတွေက ကွဲပြားတာများတယ်။ ဥပါဒါန်မှာဆိုရင် ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကား၊ အခု ဒီဇာတ်ကားကတော့ လက်ရှိခေတ်ရေစီးကို ပြထားတဲ့ကားပေါ့။ ထပ်တင်မယ့်အနန္တတို့ ဘာတို့ကတော့ Science Fiction ပေါ့နော်။ ရသတွေကတော့ တစ်ကားနဲ့တစ်ကား မတူဘူး။ နန်းဆုကို လာပြောတဲ့ ဇာတ်ကားတွေထဲကမှ ကိုယ်နဲ့လည်း လိုက်ဖက်တာ၊ ကိုယ်ကြိုးစားကြည့်လို့ရမယ့် ဇာတ်ရုပ်မျိုးကို လက်ခံရတာပေါ့။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကိုလည်း အကောင်းဆုံး ကြိုးစားပါတယ်။
■ မေး – ပရိသတ်တွေကိုပြောချင်တဲ့ စကားလက်ဆောင်များ ရှိဦးမလား။
ဖြေ – နန်းဆုကတော့ ကိုယ်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်း၊ ဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်အကြံပြုစကားလေးတွေလည်း အမြဲတမ်းလိုက်နာ ဖြစ်ပါတယ်။ နန်းဆုကို အခုလိုပဲ ချစ်ခင်အားပေးကြပါဦးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Posted in Entertainment, InterviewsTagged နန်းဆုဦးLeaveaComment on သရုပ်ဆောင်နန်းဆုဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဦးအောင်နိုင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
လတ်တလောတွင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့ကြီးအချို့တွင် မှုခင်းဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး မန္တလေးမြို့တွင် ညပိုင်းအချိန်များ၌ ပြည်သူများမှ မိမိတို့ ရပ်ကွက်တွင် လုံခြုံရေးအတွက် ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ လုပ်ကိုင်မှုများကိုလည်း ပြုလုပ်လာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရ လက်ထက်တွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်မည်ဟု ကြွေးကြော်ထားသော်လည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာ ထိရောက်မှု မရှိသေးပေ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်လည်း မှုခင်းကျဆင်းရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ခွဲများ ဖွဲ့စည်းကာ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ အဖွဲ့ခွဲက ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်က ပြုလုပ်သည့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားသူကြီးချုပ်ကိုယ်စား တက်ရောက်လာသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဦးအောင်နိုင်ကို လက်ရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အခြေအနေများ၊ တရားစီရင်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာများ၏ မေးမြန်းမှုများအနက် အချို့ကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
“ ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေ သိပ်များနေရင် တရားဥပဒေ မစိုးမိုးလို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ”
■ မေး ။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးဖို့ဆိုရင် အချက်အလက်လေး နည်းနည်းလောက် ပြောပြပေးပါ။
■ ဖြေ ။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပါဆင်နယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ ကျွန်တော်ရထားတဲ့ သင်ခန်းစာတွေအရ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ လူတစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်းက တရားဥပဒေကို လိုက်နာလာတဲ့နေ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဖြစ်မှာပါ။ လူတစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းက ဥပဒေကို လိုက်နာရကောင်းမှန်း မသိသမျှပတ်လုံး ပြစ်မှုတွေ၊ ရာဇ၀တ်မှုတွေ ဆိုတာလည်း ပေါ်နေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
■ မေး ။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးဖို့ဆိုရင် ရပ်ကွက်ထဲ က ရပ်/ကျေးတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရမယ် ဆိုတာ နည်းနည်းလောက် ပြန်ရှင်းပြပေးပါ။
■ ဖြေ ။ ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေမှာက ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက် တာဝန်တွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပေးထားပြီး ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ သူတွေ ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်လာရင် စတင် အရေးယူရမယ့် သူက သူပဲဖြစ်တယ်။ စတင် ပညာပေးရမယ့် သူကလည်း သူပဲဖြစ်တယ်။ စတင်ပြီးတော့ တင်ပြ တိုင်ကြားပေးရမယ့် သူကလည်း သူပဲ ဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံး အနည်းဆုံး အသံချဲ့ စက်ဖွင့်တာကအစ ထိန်းကျောင်းရမယ့် တာဝန်က ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဥပဒေထဲ မှာပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် အခြေခံအကျဆုံး ဖြစ်တယ်။ လူထု နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ အစုအဖွဲ့ လေးဟာ သေးသေးလေး ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီ သေးသေးလေးက စပြီးတော့ ဥပဒေစိုးမိုးအောင်၊ တရားဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာချင်လာအောင်၊ နာခံတတ်သောစိတ် ဖြစ်လာအောင် သူလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် တစ်ရပ်ကွက်ကနေ နှစ်ရပ်ကွက်၊ နှစ်ရပ်ကွက်ကနေ တစ်မြို့နယ်၊ တစ်မြို့နယ်ကနေ နှစ်မြို့နယ်၊ နှစ်မြို့နယ်ကနေ တစ်ခရိုင်၊ တစ်ခရိုင်ကနေ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ဖြစ်သွားရင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးလာပါလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
■ မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ လတ်တလော သူတို့တွေ ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေက ရပြီလားဆရာ။
■ ဖြေ ။ ရှိပါတယ်။ ဥပဒေနဲ့ကို ပြဋ္ဌာန်း ပြီးသားပါ။ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ။ တစ်ဦးချင်းရဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေကို မဖတ်မိတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖတ်ပြီးတော့ သဘော မပေါက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူတို့ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့က မြို့နယ်တို့ ခရိုင်တို့က ခေါ်ပြီး တော့ ဒီရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေကို ရှင်းလင်းတင်ပြဖို့လည်း ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ ရှင်းလည်း ရှင်းပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ ပြောင်းပြောင်း သွားတဲ့အခါမှာတော့ လက်လှမ်းမီအောင် မြို့နယ်က လိုက်မပေးနိုင်တဲ့ သဘောလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
■ မေး ။ တရားစီရင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများက ဝေဖန်နေတာလည်း ဆရာရဲ့ အမြင်လေး ပြောပြပေးပါဦး။
■ ဖြေ ။ တရားစီရင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အများက ဝေဖန်နေတဲ့ဟာ အားလုံးကို မဟုတ်ဘူး၊ မမှန်ဘူးလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အချို့ နေရာတွေမှာ ရှိကောင်း ရှိနေမှာပါ။ သို့သော် ကျွန်တော်ခုနက တင်ပြသွားခဲ့တာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ဖြင့်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာတော့ဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစိတ်ကလေး ရှိနေတဲ့အတွက် ရှက်တယ်။ ဒီလိုမျိုး အပြောခံရမှာ ရှက်တယ်။ ဒီလိုမျိုး မဖြစ်အောင် ကျွန်တော် ကြိုးစားပြီးနေတယ်ဆိုတာ ပြောတာပါ။
■ မေး ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ လက်ရှိ တရားဥပဒေ ဘယ်လောက်ထိ စိုးမိုးမှုအခြေအနေလေး ပြောပြပေးပါဆရာ။
■ ဖြေ ။ တရားဥပဒေ ဘယ်လောက်ထိ စိုးမိုးလဲဆိုတာ လူတွေ ဘယ်လောက်ထိ ပြစ်မှုများများ ကျူးလွန်သလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရင် သိပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေ သိပ်များနေရင် တရားဥပဒေ မစိုးမိုးလို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
■ မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ တရားဥပဒေ မစိုးမိုးတဲ့ ပုံစံမျိုး နေ့ခင်းကြောင်တောင်မှာ သာကေတတို့၊ ဒလတို့မှာ ဖြစ်နေတယ် ဆရာ။ အဲဒါတွေက ဘယ်လို သဘောမျိုး သက်ရောက်လဲ ဆရာ။
■ ဖြေ ။ အဲဒါတွေက ပြစ်မှုကျူးလွန်တာဖြစ်လို့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အားနည်းသွားတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။ လျော့နည်းသွားဖို့က ပြည်သူလူထုတွေက တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ဦးချင်း။ အခုကျူးလွန်နေတဲ့ သူတွေကသာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ချင်တဲ့ စိတ်မရှိဘူးဆိုရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
■ မေး ။ ဆရာတို့ အဖွဲ့အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိလဲ။ ဘယ်လိုမျိုး အကြံပေးတာတွေ ရှိမလဲခင်ဗျ။
■ ဖြေ ။ အဲဒီအတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့က ပညာပေးတာကလွဲလို့ အတင်းအဓမ္မ သွေးဆောင်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ပညာပေးတဲ့ ကဏ္ဍကတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
■ မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ ပြည်သူတွေ လုံးဝ ပြစ်မှုမကျူးလွန်အောင် လုပ်မှ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ အဲဒီအဆင့် အနေအထားကကော ဆရာ။
■ ဖြေ ။ အဲဒါက အများပြည်သူ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ အများ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ခုနက ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး မျိုးစေ့လေးကို စိုက်ပျိုးသွား ဖို့ အဓိက ကျပါတယ်။ ကြည်နိုင်
Posted in InterviewsLeaveaComment on ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဦးအောင်နိုင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
MATA အဖွဲ့၏ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးအောင်ကျော်မိုးနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း
“တိုင်းပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် ပြည်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် အကျိုးအမြတ်ဆိုတာ ရှိရဲ့လား ဆိုတာတွေကို သုံးသပ်ပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ကို အစိုးရကို တိုက်တွန်းမှုတွေ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ . . .”
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးခရိုင် တီကျစ်ဒေသအတွင်းရှိ ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံကြောင့် ဒေသအတွင်း လေထုနှင့် ရေထုညစ်ညမ်းမှု ဆိုးရွားစွာ မြင့်မားလျက်ရှိပြီး နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်ကို ဒေသခံများ ခံစားနေရခြင်းကြောင့် စက်ရုံရပ်ဆိုင်းပေးရန် တီကျစ်ဒေသခံများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာ အရပ်ဘက် မဟာမိတ်အဖွဲ့ (MATA) နှင့် မိတ်ဖက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့က အစိုးရနှင့် အများပြည်သူ သိရှိစေရန် သတင်းစာရှင်းလင်းမှုကို တောင်ကြီးနှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ တီကျစ်ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံနဲ့ ပတ်သက်၍ ဒေသအတွင်း လေထုနဲ့ရေထု စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် (MATA) အဖွဲ့၏ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးအောင်ကျော်မိုးနဲ့ မေးမြန်းထားမှုကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
မေး ။ တီကျစ် ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး MATA အနေနဲ့ ၀င်ရောက် ဆောင်ရွက်ဖြစ်ခဲ့ပုံကို အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါ။
ဖြေ ။ အဓိက,ကတော့ ဒီပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စကိုစပြီး ၀င်ရောက်ဖြစ်တာက ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ စတင်သိခဲ့တာက ဒီစက်ရုံအကြောင်းကို Eleven Media ကပဲ ဖော်ပြခဲ့တာတွေရှိတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ စက်ရုံကို တင်ဒါပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ကြားရတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒေသခံတွေအတွက် စိုးရိမ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွင်းမှာပဲ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ အနေနဲ့ လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးနေတဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ရှိနေတဲ့အတွက် လူထုလှုပ်ရှားပွဲလုပ်မယ့် ကိစ္စက ပြည်သူ့ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာ စိုးတဲ့အတွက် နောက်ကိုဆုတ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုတ်ပြီး ဒီကိစ္စကို စောင့်ဆိုင်းပါတယ်။ အရပ်သားအစိုးရ တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလမှာပဲ ဒီစက်ရုံကို EIA (ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ရေး) လုပ်ဖို့ ဆိုပြီးတော့ စတင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ လူထုတွေ့ဆုံပွဲဆိုပြီး ပြုလုပ်လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ သွားတက်ပါတယ်။ အဲဒီလို တက်ရောက်တဲ့ အခါမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ လူမှုအရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဆွေးနွေးခွင့် မပေးပါဘူး။ ကော်မတီက ရှင်းပြတယ်။ ၀န်ကြီးတွေက စကားပြောတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်တွေက စကားပြောတယ်။ လူမှုအရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ဆွေးနွေးခွင့်ပေးပါလို့ တောင်းတော့မှ ည ၉ နာရီမှသာ ဆွေးနွေးခွင့် ပေးမယ်လို့ သိရတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်း သူတို့ဇာတ်တိုက်ထားတဲ့သူ တစ်ယောက်တည်းကပဲ မေးခွန်းတွေကို ဒိုင်ခံမေးနေတယ်။ ပြောခွင့် ကျွန်တော်တို့ကို မပေးတဲ့အတွက် လူထုကန့်ကွက်မှုတွေ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရသစ် ပြောင်းလဲလာတဲ့ အချိန်မှာလည်း စက်ရုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို မျက်ခြည်မပြတ် နားထောင်ပါတယ်။ စက်ရုံနဲ့ပတ်သက်လို့ မီဒီယာတွေကနေတစ်ဆင့် ကန့်ကွက်ကြောင်း အစိုးရကို ပြောကြားမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေသခံတွေရဲ့ ဒုက္ခကို ကြည့်ပြီး အရပ်သား အစိုးရအနေနဲ့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ စက်ရုံကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့၊ စာချုပ်စာတမ်းတွေကို ပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့ကိုပါ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် ပြည်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် အကျိုးအမြတ်ဆိုတာ ရှိရဲ့လား ဆိုတာတွေကို သုံးသပ်ပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ကို အစိုးရကို တိုက်တွန်းမှုတွေ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်လိုက်လဲဆိုရင် စက်ရုံကို EIA လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ စမ်းသပ်လည်ပတ်ခွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို စမ်းသပ်ခွင့် ပေးလိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အံ့သြပါတယ်။ EIA ဆိုတာက လုပ်ငန်းမစမီကတည်းက အရင်လုပ်ဆောင်ရတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါပေမဲ့ စက်ရုံလည်ပတ်ပြီးတော့မှ EIA လုပ်တယ် ဆိုတာက တော်တော်ကို ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ လွဲမှားမှုကြီး တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ လွဲချော်စွာ လုပ်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ စက်ရုံတစ်ခု လည်ပတ်တော့မယ်ဆိုရင် EIA လုပ်တော့မှပဲ ဆောင်ရွက်ရတာပါ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကပဲ ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါ ဥပဒေကို အလွဲသုံးစား လုပ်ပြီးတော့ အကျိုးစီးပွားကိုပဲ မျက်နှာမူတယ်။ ပြည်သူ့အကျိုးကို မျက်ကွယ်ပြုနေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယူဆပါတယ်။ အဲဒီအတွက် MATA အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့ ဒီစက်ရုံကိစ္စကို စနစ်တကျ ပြောဆိုနိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။
မေး ။ ဆိုတော့ လက်ရှိ တီကျစ်ဒေသမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ။
ဖြေ ။ လက်ရှိ တီကျစ်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ပညာရှင်တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေအရဆိုရင် ဒေသအတွင်းမှာ လေထုညစ်ညမ်းမှုတွေ၊ ရေတွေ အဆိပ်သင့်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုတွေကလည်း သူတို့အကျိုးစီးပွား အတွက်ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ အစိုးရဘက်ကလည်း မျက်ကွယ်ပြုနေတယ်။ ဒီကိစ္စကို စနစ်တကျနဲ့ ပြန်လည်စီစစ်ရမယ့်အစား မျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်အရပဲဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီးတော့ ပြောနေတယ်။ ဒေသအတွင်းမှာ လူတွေ ဒါကို ရဲရဲတင်းတင်း ပြောချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသလည်း ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တစ်ဖက်မှာ ပြည်သူ့စစ်တွေရဲ့ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုတွေရှိတယ်။ ဒေသခံတွေဘက်က ရိုးသားမှုတွေနဲ့ အကြောက်တရားတွေ ရှိနေတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ မပြောရဲ မဆိုရဲဘူး။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့တွေက ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ဒါကို အစိုးရကို သုတေသန လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ အထောက်အထားတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတာကို ပါဝင်စေချင်လို့ ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံကြောင့် ဒေသခံတွေ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနေလဲ။
ဖြေ ။ ကျောက်မီးသွေး ဆိုးကျိုးအနေနဲ့က မိုင်းခွဲမှုတွေရှိတယ်။ မိုင်းခွဲမှုတွေက အနီးမှာရှိတဲ့ မြေကြီးတွေ အက်ကွဲကုန်တယ်။ အနီးမှာရှိတဲ့ လူနေအိမ်တွေကလည်း တုန်ခါမှုဒဏ်တွေကို ခံနေရတယ်။ သာယာကုန်း ရွာမှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိခဲ့တာက စွန့်ပစ်မြေစာပုံကြီးက အကြီးကြီးဖြစ်ပြီး အိမ်တွေအပေါ်မှာ ရောက်နေသလို ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါကြီး ပြိုကျလာမှာကိုလည်း ဒေသခံတွေက စိုးရိမ်ကြောက်နေကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မိုင်းဧရိယာကနေပြီးတော့ စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့မြေကြီး ဆက်လက်ပုံဖို့အတွက် နေရာကြောင့် လယ်သမားတွေ သူတို့မြေတွေ အသိမ်းခံလာရမှာကို ကြောက်နေတယ်။ တောင်ကြီးမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ အဲဒီက ဒေသခံ တစ်ယောက်မှာဆိုရင် သူ့မှာဦးပိုင်အမှတ်တွေ ရှိတယ်။ ပုံစံ ၇ အထိရှိတယ်။ ဒါကို မိုင်းတွင်းဧရိယာ ဆိုပြီး စိုက်ပျိုးမြေကိုလာပြီး သိမ်းမယ်ဆိုပြီး ကြားတဲ့အချိန်မှာ ဒေသခံလူထုရဲ့ စိတ်မလုံခြုံမှုတွေ၊ ဘ၀မလုံခြုံမှုတွေကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့ပုံစံတွေ ယနေ့ချိန်မှာ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို တွေ့ရတယ်။ လေထုနဲ့ ရေညစ်ညမ်းမှုကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ရောဂါတွေ၊ ဒြပ်ထုလွန်ကဲမှုကြောင့် ဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ခံစားနေရနိုင်တယ်။
မေး ။ ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေက ဆက်လက်ပြီးတော့ ရှိနေလား။
ဖြေ ။ ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံသက် တမ်းလိုင်စင်က ၂၂ နှစ်အထိ ဖြစ်တယ်လို့ သိရတယ်။ အဲဒါက ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက်က စတင်ချုပ်ဆိုထားတာ ဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့ ၂၀၂၈ ခုနှစ်အထိကို သက်တမ်းတိုးခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ၂၂ နှစ်အထိ လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာ ဧက ၅၀၀ နဲ့တင် မလုံလောက်နိုင်ဘူး။ ထပ်ပြီးတော့ တိုးချဲ့အနေအထား ရှိလာမယ်။ အဲဒီတော့ မိုင်းတွင်းက ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ကြီးလာဖို့ပဲရှိမယ်။ တစ်ရက်ကို တန်ချိန် နှစ်ထောင်တူးမယ့် ကိစ္စက ဒီထက်ကိုပြီး မိုင်းတွင်းက ထက်ချဲ့ဖို့ပဲ ရှိလာနိုင်တယ်။
မေး ။ တီကျစ်ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံကို ဘယ်သူတွေ လုပ်ဆောင်နေလဲ။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပိုင်းကရော ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ ။ တီကျစ်ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင် နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ တီကျစ် ကျောက်မီးသွေးတွင်းနဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံကို စက်မှုကုန်ကြမ်းအနေနဲ့ ကျောက်မီးသွေး သွင်းတာက ဧဒင်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီပါ။ ဒီစက်ရုံအပိုင်းကို တင်ဒါခေါ်တဲ့ အခါကျတော့ ဘယ်လိုခေါ်ခဲ့သလဲတော့ မသိဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် ၀ူရှီဟွာဂေါင်ကုမ္ပဏီက တင်ဒါရခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ ဘယ်လိုသဘောတူညီ ချက်တွေနဲ့ စာချုပ်တွေချုပ်ဆို ထားတယ်ဆိုတာ အများပြည်သူ မသိဘူး။ သူတို့ စာရင်းဇယားအရ ထုတ်ပြန်မှုအရတော့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၇ သန်းနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ သိရတယ်။
မေး ။ ဒီစက်ရုံစီမံကိန်းကြောင့် ဒေသခံပြည်သူတွေအပေါ် ဘယ်လိုလျော်ကြေးတွေရလဲ။ ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိနိုင်လဲ ဆိုတာကိုရော MATA အနေနဲ့ သိထားလဲ။
ဖြေ ။ အရင်တုန်းကတော့ မြေယာသိမ်းဆည်းတွေကြောင့် ရွာတွေ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတာတွေရှိတယ်။ စစ်အစိုးရ လက်ထက်ကပေါ့။ လက်ရှိအခြေအနေကတော့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ မရှိဘူး။ CSR ဆိုတဲ့ ကိစ္စပဲရှိတယ်။ CSR လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၅၀၀ ပေးမယ် ဆိုပြီးတော့မှ ရန်ပုံငွေ သုံးစွဲပါမယ် ဆိုတာကိုပဲ သိထားတယ်။ အဲဒါကို ဘယ်လိုသုံးစွဲမလဲ။ လူထုအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ပါမယ် ဆိုတာကိုတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိသေးပါဘူး။
မေး ။ တီကျစ်ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ MATA ရဲ့ စမ်းသပ်တွေ့ရှိ ချက်တွေအပါ် အစိုးရနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းက ဘယ်လိုရှိလဲ။ ပူးပေါင်းမှု အပိုင်းမှာရော ဘယ်လိုအနေအထားရှိလဲ။
ဖြေ ။ တကယ်တမ်းပြောရရင် ဒီဥစ္စာက တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ လူထုဘ၀ လုံခြုံမှု အပိုင်းကို ဦးစားပေးရမယ့်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ လူထုဘက်ကနေ ရပ်တည်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အလားအလာတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်တော့ အစိုးရအနေနဲ့ လူထုစကားကို လေးလေးစားစား နားထောင်မှုတွေ လုပ်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ အစိုးရဆိုတဲ့ အပိုင်းက နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ဖွဲ့တည်ထားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားတာက နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူတွေပါ။ အဲဒီတော့ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူတွေက စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရဲရဲတင်းတင်း ချရမှာပါ။ ဟိုလူကိုလွှဲချ၊ ဒီလူကို လွှဲချပြီးတော့ လုပ်နေတဲ့ကိစ္စက နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ မပီသပါဘူး။ အစိုးရတစ်ရပ် အနေနဲ့ လုပ်ရမယ့်ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ လူထုက အာဏာအပ်နှင်း ထားတဲ့အတွက် လူထုအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးရမယ်။ လူထုအသံကို နားထောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို မပူးပေါင်း၊ မဆောင်ရွက်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေတဲ့ အပေါ်မှာ တော်တော်ကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။
မေး ။ အဲဒီတော့ တီကျစ်ဒေသအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အစိုးရအနေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရှိလာအောင် ဘယ်လိုဆက်လက် ဆောင်ရွက်မလဲ။
ဖြေ ။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ကတော့ သက်ဆိုင်တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီး အစိုးရပါဝင်မှု ရှိလာအောင် ဆက်လက်တိုက်တွန်းမှုတွေ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ချဉ်းကပ် ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ ပြောဆိုသွားဖို့ ရှိပါတယ်။
မေး ။ တီကျစ်ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံတွေအတွက် လိုက်လံဆောင်ရွက် ပေးနေတဲ့ MATA အနေနဲ့ အစိုးရအပေါ် ဘယ်လိုတောင်းဆိုချင်လဲ။
ဖြေ ။ အဓိကအနေနဲ့ အစိုးရကို တောင်းဆိုချင်တာက ဒီကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကို ချက်ချင်းရပ်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ဒေသခံတွေအတွက် တီကျစ်ဒေသမှာရှိတဲ့ လေထု၊ ရေထုကို အစိုးရ အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီး စစ်ဆေးပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒေသခံလူထုကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကို လုပ်ဆောင် ပေးစေချင်ပါတယ်။
မေး ။ တခြား ဖြည့်စွက်ပြောကြား ချင်တာများ ရှိရင်ပြောပေးပါ။
ဖြေ ။ မရှိတော့ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted in InterviewsTagged MATA, တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးLeaveaComment on MATA အဖွဲ့၏ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးအောင်ကျော်မိုးနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း
မူဆယ် ၁၀၅ မိုင် သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းမြင့်ဘိုနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted on September 9, 2018 September 9, 2018 by ဇေယျာငြိမ်း
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ပြည်ပကို သစ်သီးတင်ပို့မှု အခြေအနေမှာ အိမ်နီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံတစ်ခုထဲကိုပဲ အဓိကတင်ပို့နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဈေးကွက်တစ်ခုထဲကိုပင် အားကိုးနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သစ်သီးဈေးကွက်မှာ အရည်သွေးပိုင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပိုင်းတွေမှာ အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီလို တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်တစ်ခုထဲ အားကိုးနေရချိန် အခက်အခဲများနဲ့ ရင်ဆိုင်နေအချိန်မှာပဲ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အမည်ခံတွေနဲ့ ဖရဲကို တရားမ၀င် လာရောက်စိုက်ပျိုးမှုတွေကလည်း ပြည်တွင်းသစ်သီး စိုက်ပျိုးသူများအတွက် နစ်နာမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံကို အဓိကသစ်သီးတင်ပို့နေတဲ့ မူဆယ် ၁၀၅ မိုင် သစ်သီးဝလံ ကုန်စည်ဒိုင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းမြင့်ဘိုအား မေးမြန်းထားခြင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံသားကနေ နာမည်ခံလိုက်တယ်။ တကယ်က နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေက ကျွန်တော်တို့ သစ်သီးမှာတင်မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားကဏ္ဍတွေမှာ . . .
■မေး – လက်ရှိမူဆယ်နယ်စပ်ရဲ့သစ်သီးဝလံအ ရောင်းအ၀ယ်အခြေအနေကို ပြောပြပေးပါ။
■ဖြေ – လက်ရှိမူဆယ် ၁၀၅ မိုင်မှာ သစ်သီးတင်ပို့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လည်ပတ်ပုံကတော့ အဓိကထားတင်ပို့တာကတော့ အများဆုံးက ဖရဲသီး၊ ပြီးရင်သခွားသီး ပြီးရင်သရက်သီးနောက်တော့ နာနတ်သီးတွေဘာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်အနှံ့က ထွက်လာတဲ့ သီးနှံမျိုးစုံက အခုပြောတဲ့ လေးမျိုးထဲကပေါ့ဗျာ၊ ၁၀၅ မိုင်ကို ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ ၁၀၅ မိုင်မှာရှိတဲ့ အရောင်းကွင်းမှာ ရောင်းပြီးတာနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ လုပ်ပြီးတာနဲ့ တရုတ်ဝမ်တိန်မှာရှိတဲ့ ကွင်းမှာလာပြီး သစ်သီးလှယ်ကြတာပေါ့။ ဒီဘက်မှာ ပစ္စည်းကိုလာချိန်းပြီးတော့ တရုတ်ပြည်အနှံ့အပြားကို ပြန်တင်ပို့ပါတယ်။
■မေး – တစ်ရက်ကို ပုံမှန်သစ်သီးတန်ချိန် ဘယ်လောက်လောက် တင်ပို့နေလဲဆရာ။
■ ဖြေ – ကျွန်တော်တို့ ဖရဲသီးဆိုရင်တစ်ရက်ကို တန်ချိန်ခန့်မှန်းခြေ လေးထောင်နဲ့လေး ထောင်အထက်မှာ တင်ပို့ရောင်းချနေတယ်။ သခွားမွှေးဆိုရင်တော့ တစ်ရက်ကိုတန်ချိန် တစ်ထောင့်ငါးရာလောက် တင်ပို့တယ်။ သရက်သီးဆိုရင်တော့ တစ်ရက်ကိုတန်ချိန် ပျှမ်းမျှငါး ရာပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပါ။
■မေး – မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ တရုတ်ပြည်ကို အဓိကတင်ပို့နေတဲ့ သစ်သီးအမျိုးအစားက ဘယ်အမျိုးအစားတွေလဲ။
■ ဖြေ – အများဆုံးတင်ပို့တာက ကျွန်တော် ခုနကပြောသလို အများဆုံးကတော့ဖရဲသီး ဒုတိယက သခွားမွှေး၊ တတိယကတော့ သရက်သီးပေါ့။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ နာနတ်သီး လိုက်လာတယ်။ ထိုင်ဝမ်ဇီးသီးဆိုတာရှိတယ်။
■မေး – ဈေးကွက်က တရုတ်တစ်ခုထဲလား။ တင်ပို့နေတဲ့ပမာဏက ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ။
■ဖြေ – ဖရဲသီးတို့ သခွားမွှေးတို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ထွက်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း ၉၀ အထက်က တရုတ်ပြည်တစ်ခုထဲကို တင်ပို့တာ။ သရက်သီးက ရာခိုင်နှုန်း ၉၀ လောက်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ သရက်သီးကတော့ စင်ကာပူတို့ဘာတို့ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေ အနည်းအကျဉ်း တင်ပို့တာရှိတဲ့အတွက် ဖရဲသီးနဲ့ သခွားမွှေးကတော့ အခုလက်ရှိတော့ အဓိက တရုတ်ပြည်တစ်နိုင်ငံထဲကိုပဲ တင်ပို့နေတာ။ တရုတ်ပြည်ကတစ်ဆင့် ကျန်တဲ့ဟောင်ကောင် မလေးရှားတို့ကို တင်ပို့တယ်လို့တော့ ကြားဖူးတယ်။ အဲဒါကတော့ ပမာဏမများပါဘူး။
■မေး – ကုန်စည်ဒိုင်မှာဆိုရင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှ ရောင်းဝယ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့။ လောလောဆယ်မှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကို အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်ပေးထားတာရှိတယ်။ ဒီအခြေအနေက ပြည်တွင်းကုန်သည်တွေကြားမှာ ရောင်းဝယ်မှုပုံစံက ဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိလဲ။
■ ဖြေ – ကျွန်တော်တို့ နယ်စပ်မှာနေပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတဲ့ အခါကျတော့ အဓိက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုန်သွယ်ဖက်က တရုတ်နိုင်ငံသားပဲ ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရေရှည်လုပ်ငန်းအရ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြေပြင်အနေအထားအရ တရုတ်ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေကို ကျွန်တော်တို့ သစ်သီးကုန်စည်ဒိုင်မှာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ပြီး ရောင်းချခွင့် ပြုထားတယ်ဆိုတာကသူက ဒီတရုတ်နိုင်ငံသား နာမည်နဲ့ဝင်ထားခြင်းမျိုး မရှိဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံသားကနေ သူ့ပတ်သက်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသားကနေပြီးတော့ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ပြီးတော့ လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ အနေထားရှိတယ်။
■မေး – လက်ရှိမှာ တရုတ်ငွေယွမ်ဈေးက ဒေါ်လာဈေးနဲ့ ယှဉ်ရင်ဈေးကျနေတယ်။ တင်ပို့တဲ့အချိန်မှာ ၀င်ငွေကလျော့နိုင်တယ်။ ဒါကို သုံးသပ်ပေးပါဆရာ။
■ ဖြေ – ကျွန်တော်တို့ ရောင်းဝယ်မှုပုံစုံမှာ အဲလောက်အထိတော့ သွားပြီးရိုက်ခတ်ခြင်း၊ အဲဒီအပေါ်မှာ အာရုံရောက်ခြင်းတော့ သိပ်မရှိဘူး။ ဒီနေ့ရောင်းလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းကို ဒီနေ့ ပေါက်ဈေးနဲ့ ငွေလဲကြတာပဲများတယ်။
■မေး – အပြင်မှာလည်း တောင်သူတွေ ဈေးကောင်း မရတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ပြောနေတာတွေရှိတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို ပြေလည်အောင် ဆရာတို့ ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်လဲ။
■ဖြေ – ကျွန်တော်တို့လည်း အမြဲတမ်းလည်း ပြောနေပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ကို တင်ပို့ရောင်းချနေတာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ က တရုတ်ပြည်နဲ့ အခုတရုတ်ပြည်နဲ့ အများကြီး ပြောင်းလဲသွားပြီ။ ကျွန်တော်လုပ်လာတာဆို နှစ်သုံးဆယ်ကျော်ပြီ။ အရင်တုန်းက သရက်သီးဆိုလည်း ဘယ်အရည်အသွေးမျိုး ဘယ်အမျိုးအစားမဆို ရောင်းခဲ့ရတယ်။ အခုဆိုရင် အမျိုးအစားလည်းကောင်းမှ အရည်အသွေးလည်းကောင်းမှ ဖြစ်လာတယ်။ တရုတ်ပြည်က ကျွန်တော်တို့ကို ၀ယ်နေတဲ့ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံက တစ်ချိန်တုန်းက အလယ်အလတ်ပေါ့ဗျာ။ အခုက တရုတ်ပြည်က ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအင်အား နံပါတ် (၂) နိုင်ငံဆိုတော့ ချမ်းသာလာတော့ ချမ်းသာတဲ့လူတန်းစားလည်း မြင့်လာတယ်။ အဲဒီခါမှာ အရည်သွေးကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းကို ဈေးနှုန်းမြှင့်ပေးဖို့ကို မကြောက်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ၁၀၅ မိုင်မှာ ရောင်းနေတဲ့ ဈေးနှုန်းဆိုရင် တကယ်အခြေ အနေကောင်းတယ်ဆိုရင် သခွားသီးဆိုရင် တစ်ကီလိုကို ယွမ်ခုနစ်ယွမ်၊ ရှစ်ယွမ်ရတယ်။ တစ်ချိန်တုန်းက ရောင်းတာဆိုရင် အမြင့်ဆုံး သခွားသီးတစ်ကီလိုကို ၆ ဒသမ ၅ ယွမ်အထိ ရောင်းခဲ့ရဘူးတယ်။ တစ်တန်ကို ၁၆၅၀၀ ပေါ့။ ဒါယွမ်ငွေနော်။ အဲလောက်အထိ ရောင်းခဲ့ရဖူးတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အနီးစပ်ဆုံးဆိုရင် သခွားအရည်သွေးကောင်းရင် တစ်ကီလိုကို ခုနစ်ယွမ်လောက်အထိ ရောင်းရတယ်။ လက်ရှိငွေဈေးနဲ့ဆို တစ်ကီလိုကို မြန်မာငွေ ကျပ် ၁၅၀၀ လောက် ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီလောက်အထိ ရောင်းခဲ့ရဖူးတယ်။ သရက်သီးဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ ၁၀၅ မိုင်မှာ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ အသီးဆိုရင် တစ်ကီလိုကို ၁၀ ယွမ်လောက်အထိရတယ်။ တစ်တန်ဆို တရုတ်ငွေတစ်သောင်း မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် သိန်း၂၀ ကျော်အထိ ရောင်းနေရတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်ဘက်က အဓိကတောင်သူတွေကတော့ အဓိကပြောချင်တာကတော့ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့တော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုတယ်။
■မေး – သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပိုင်းကရော ဘယ်လို အခက်အခဲတွေရှိလဲ၊ ကုန်ကျစရိတ်ကရော ဘယ်လောက်အထိ ကုန်ကျလဲ။
■ ဖြေ – သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပိုင်းက နံပါတ်တစ်ကတော့ လမ်းပေါ့ဗျာ။ လမ်းကိုအခုလက်ရှိ အနေအထားထက် ဘယ်လိုကောင်း အောင်လုပ်မလဲ။ တရုတ်ပြည်က အမြန်လမ်းတွေဆိုရင် ကုန်တင်ကားတွေဆို ကန့်သက်ထားတာ တစ်နာရီကို ကီလိုမီတာ ၈၀ အဲဒီလောက်အထိ မောင်းလို့ရတာတယ်။ သူ့နိုင်ငံမှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်က ဒီကုန်တင်ကားကြီးတွေက ပျှမ်းမျှတစ်နာရီကို ကီလိုမီတာ ၆၀ သွားလို့ရတယ်။ သူ ၂၄ နာရီဆိုရင် ယာဉ်မောင်း နှစ်ယောက်သုံးယောက် ပြောင်းပြီးသွားမယ်ဆိုရင် တစ်ရက်ဟာ ကီလိုမီတာ ၁၄၀ ကျော်သွားလို့ရတယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်ကနေ မူဆယ်ကိုလာတဲ့လမ်းက အမြန်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်လုပ်နှစ်ညပဲ။ ဒီကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးက သူ့ထက်သုံးဆလောက် ပေးရတဲ့အတွက် ဒီကသယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်ကလည်း အနည်းဆုံးနှစ်ဆခွဲကနေ အများဆုံး လေးဆအထိ လက်ရှိအနေအထားမှာ ပေးနေရတယ်။
■မေး – တရုတ်နိုင်ငံသားတွေက မြန်မာနိုင်ငံအထဲ ၀င်ရောက်ပြီး တရားမ၀င် ဖရဲတွေ ၀င်ရောက်စိုက်ပျိုး နေတာတွေရှိတယ်။ ဒါတွေက တောင်သူတွေကို ဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေ ရှိလဲ။
■ဖြေ – ဒါအပွင့်အလင်းဆုံးပြောမယ် ဒါကိုထည့်ချင်လည်းထည့် ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဒါတွေကတော့ အခုလက်ရှိ အခြားကဏ္ဍတွေလိုပဲပေါ့ နာမည်ခံနေတဲ့ လူတန်းစားတွေ ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ နိုင်ငံသားကနေ နာမည်ခံလိုက်တယ်။ တကယ်က နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေက ကျွန်တော်တို့ သစ်သီးမှာတင် မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားကဏ္ဍတွေမှာလည်း ရှိကောင်းရှိနေမှာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ သစ်သီးမှာတော့ လက်ရှိကတော့ ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်က အကြံပြုလိုတာကတော့ ဒီရေစီးကြောင်းကြီးကို တားလို့မရဘူး။ တားလို့မရမယ့်အတူတူတော့ ကျွန်တော်တို့က တရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးတော့ တရားဝင်က MIC ကို တင်လိုက်ဦး ဟိုဟာတင်လိုက်ဦးဆိုတဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ထုံးတွေ အဲဒီလိုမျိုးနဲ့ လိုက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင် တကယ့်တရားဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူကလည်း မရှိဘူး။ မရှိတော့လည်း မလာဘူးလားဆိုတော့လည်းလာတယ်။ လာဦးမှာ လာနေမှာပဲ။ အဲဒီတော့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းပေါ့ ဥပမာ ဒီတစ်ခင်းကို ဘယ်သူလာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲ။ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်၊ သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာပေါ့ဗျာ။ တရုတ်ပါတယ်။ ထမင်းချက်တစ်ယောက်ပဲပါပါ ဒါက တရုတ်ပါတယ်။ စုံစမ်း။ တရုတ်ပါတယ်ဆိုရင် တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါတဲ့အတွက် မင်းတစ်ဧကကို မြို့နယ်ကအခွန်ဦးစီးက ကောက်မလား။ မင်းတို့ကို လွတ်လပ်စွာစိုက်ခွင့်ပေးမယ် နိုင်ငံသားလို တန်းတူအခွင့်အရေးပေးမယ်။ အခက်အခဲဖြစ်ရင်ပြော။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မင်းတို့လုံခြုံရေးလုပ်ပေးမယ်။ တစ်ဧကကိုတော့ဖြင့် ငါတို့နိုင်ငံကို တရားဝင် သတ်မှတ်ကြေးတစ်ခုနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူလေး ဒီနေ့လာစိုက်မယ် ဒီနေ့သွားဆောင်မယ်။ အဲဒီလို နည်းလမ်းနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လည်း အခွန်ရမယ်။
■မေး – လက်ရှိမှာ ပြည်တွင်းသစ်သီးစိုက်ပျိုးမှုက တိုးတက်လာတယ်ပြောတယ်။ ဒါက တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ဒီလိုဝင်ရောက်စိုက်ပျိုးတဲ့ဟာတွေကြောင့် တိုးတက်နေတာလား။
■ ဖြေ – အခုလုပ်နေတာတွေက တရားဝင်တယ် မ၀င်ဘူးဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း စာရင်းဇယားကိုင်တွယ်တဲ့ ဌာနမဟုတ်တော့ မသိနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အပေါ်ယံအမြင်ကတော့ ၁၀၅ မိုင်မှာ လက်ရှိတရုတ်ပြည်ကို တင်ပို့နေရောင်းချနေတဲ့ ဖရဲသီးရဲ့ ပမာဏဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေ ပိုင်နေတဲ့ ပမာဏက တစ်ဝက်ကျော်သွားပြီ။ ဒီမှာ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ တစ်ဝက်ကျော်သွားပြီ။ ရာခိုင်နှုန်း ၆၀၊ ရာခိုင်နှုန်း ၇၀၊ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ကိုတော့ ကျွန်တော်မပြောလိုဘူး။ တစ်ဝက်ကျော်တာကတော့ သေချာသွားပြီ။ တရုတ်ရဲ့ တရားဝင် စာရင်းဇယားအခွန်မှာရတဲ့ပမာဏ တစ်ဝက်ကျော်တာမကျော်တာတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်ပြောလိုတာက ဒီကိစ္စကို လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ပေး။ တရုတ်နိုင်ငံသားလာတယ်။ ဖရဲသီးစိုက်ချင်တယ်။ တစ်ဧကဘယ်လောက်ကောက်မလဲ။ တစ်ဧက ငါးသိန်းဆို ဆောင်မယ်စိုက်မယ်။
မဆောင်ဘူး မစိုက်နဲ့။ အဲလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်လည်း အခွန်တွေအများကြီးရရှိမှာ။
■မေး – သစ်သီးဈေးကွက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာအနေနဲ့ ဖြည့်စွပ်ပြောချင်တာရှိရင် ပြောပေးပါ။
■ဖြေ – ဈေးကွက်ကတော့ ကိုယ့်ဘက်က ဖြည့်ရမှာ အများကြီးလိုတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုက ဒီအရည်အသွေးက ကောင်းသွားပြီ နာမည်ပေါက်သွားပြီဆိုရင် ဖရဲသီးချင်းတူရင် တောင်သူများထက် ဈေးနှုန်းပိုရလိမ့်မယ်။ အခုလက်ရှိကတော့ တရုတ်ပြည်က တစ်နေ့တစ်ခြား ချမ်းသာလာတဲ့အခါမှာ အရည်သွေးမြင့်တွေကို စားသုံးလာနိုင်တယ်။ အဲဒီတော့ မြန်မာဘက်ခြမ်းက တောင်သူတွေ အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ကတော့ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးအသီးကို အထွက်နှုန်းအကောင်းဆုံးနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲ။ ဒါကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားရလိမ့်မယ်။
Posted in InterviewsTagged ဦးစိုင်းမြင့်ဘိုLeaveaComment on မူဆယ် ၁၀၅ မိုင် သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းမြင့်ဘိုနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
MM Social လူမှုကွန်ရက်၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ကိုရန်နိုင်မြင့်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted on September 5, 2018 September 6, 2018 by ဝေထွန်းနောင်
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲ စီးဆင်းရမယ့် သတင်းအချက်အလက်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲ စီးဆင်းစေချင်တယ် . . .
Facebook လူမှုကွန်ရက်က မြန်မာတပ်မတော်နှင့်ပတ်သက်သည့် အကောင့်နှင့် စာမျက်နှာတို့ကို ဖယ်ရှားခဲ့ပြီးနောက် VK ဆိုသည့် ရုရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် လူမှုကွန်ရက်တစ်ခု အနည်းငယ် ခေတ်စားလာသည်။ ယခုတစ်ဖန် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အညီရှိမည်ဆိုသည့် MM Social လူမှုကွန်ရက်တစ်ခု ပေါ်လာတော့မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းလူမှုကွန်ရက်မှ Facebook ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအတိုင်း ထပ်တူကျနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်မည်ဟု ပြောကြားထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် တည်ဆဲဥပဒေများအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သုံးစွဲသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုလည်း ပေါက်ကြားမှုမရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ထားပြီး သတင်းအမှားများ၊ အကောင့်တုများနှင့်လည်း ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်သွားမည်ဟု ပြောကြားထားသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာလူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည့် MM Social ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး Eleven ၏ စာဖတ်ပရိသတ်များ သိရှိစေရန် MM Social ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ကိုရန်နိုင်မြင့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါသည်။
မေး ။ ပထဦးဆုံးအနေနဲ့ MM Social အကြောင်းနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါ ခင်ဗျ။
ကိုရန်နိုင်မြင့် ။ MM Social က မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက်လူမှုကွန်ရက် (Social Network) တစ်ခု ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ MM Social က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေအောက်မှာပဲ ရှိမယ်။ နောက်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ လက်ရှိ ပြည်တွင်းမှာ ပြည်ပက လူမှုကွန်ရက်တွေကို အသုံးပြု မှီခို နေရတယ်။ အဲဒီတွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ငွေ (ကြော်ငြာခ) တွေက အခွန်မပါဘူးပေါ့နော်။ အခွန်မရှိတဲ့အတွက် တိုင်းပြည်အတွက်က ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာနစ်နာမှုတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အဲဒီဟာတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်း ကနေ တားဆီးချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လည်း ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သတင်းအချက်အ လက်ပေါက်ကြားမှုတွေ တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ အဲဒါကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့က တားဆီးချင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲ စီးဆင်းရမယ့် သတင်းအချက်အလက်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲ စီးဆင်းစေချင်တယ်။ ဒါကတော့ ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့နော်။
မေး ။ MM Social က Facebook နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် (Feature) တွေ တူသလား။ ဒါမှ မဟုတ်ပိုပြီး ဆန်းသစ်ထားတာမျိုးတွေ ရှိသလား။ ဘယ်လို ပိုကောင်းခွဲထွက်ထားလဲ သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ ။ MM Social က လူမှုကွန်ရက်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုမှာ ရှိသင့်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ ပါမယ်။ လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ Like တွေ Comment တွေ မပါရင်လည်း မဖြစ်ပြန်ဘူး။ တခြား လူမှုကွန်ရက်တွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေအတိုင်း ရှိမယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် (Rule) တွေကို သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအတိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေအတိုင်း သတ်မှတ်သွားဖို့ ရှိတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးတော့ ကွာခြားပါမယ်။ တခြား ကျွန်တော်တို့ ထပ်ထည့်မယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ စီးပွားရေးအစီအစဉ်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြောလို့မရသေးပါဘူး။
မေး ။ ဖောင့် (Font) ကို အစ်ကိုတို့ ဘယ်လို စီစဉ်ထားလဲ။
ဖြေ ။ဖောင့်အနေနဲ့က သုံးတဲ့သူက ကြိုက်တာနဲ့ သုံးလို့ရတယ်။ ဇော်ဂျီနဲ့ သုံးလည်းရတယ်။ ယူနီကုတ်နဲ့ သုံးလည်းရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြန်ဖတ်ပြီဆိုရင် ယူနီကုတ်နဲ့ အမှန်မြင်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ Beta မှာလည်း အဲဒီဟာ တွေက စမ်းကြည့်ပြီးသွားပြီ။ အကုန်လုံးလည်း ကြိုက်ကြတယ်။ အဆင်ပြေတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ သုံးတဲ့သူက ဇော်ဂျီနဲ့ ရိုက်ထည့်လိုက်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပြန်ပြလည်း ပြရော ယူနီကုတ်နဲ့ ပြန်ပြတယ်။ ဆိုလိုတာက ဖတ်လို့မရ ဘူးလားဆိုတော့ ဖတ်လို့ရတယ်။ ယူနီကုတ်ကို ဖတ်လို့ရတယ်။ ယူနီကုတ်ကို Word Font အနေနဲ့ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ထည့်ထားစရာမလိုဘူး။ မည်သူမဆို ရေးတာက ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးရေး၊ ယူနီကုတ်နဲ့ရေးရေး ကြိုက်တာနဲ့ရေး ယူနီကုတ်နဲ့ အမှန်ပြပေးမယ်။
မေး ။ ဒေတာ သိမ်းဆည်းမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပေးပါဦး ခင်ဗျ။
ဖြေ ။ ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုအပိုင်း သို့မဟုတ် အခြေခံအဆောက်အအုံ (infrastructure) ပိုင်းကတော့ ပြည်တွင်း Cloud ၀န်ဆောင်မှုကို သုံးထားတယ်။ AGB Communications ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကနေ သုံးထားတယ်။ ဒေတာတွေက သူတို့ အဆောက်အအုံ (AGB Cloud) ထဲမှာပဲ ရှိပါလိမ့်မယ်။
မေး ။ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံမှုအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုပြင်ဆင် ထားပါသလဲ။
ဖြေ ။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နဲ့တကွ ဒီ MM Social တစ်ခုလုံးရဲ့ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ စပြီးရေးထဲကိုက ကျွန်တော်တို့ Cyber Wing ကုမ္ပဏီကနေ လုံခြုံရေးအသိ (Security Awareness) ရှိရှိနဲ့ ရေးတယ်။ အကယ်၍ အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုကြောင့် လစ်ဟာသွားတာတစ်ခုခု ရှိမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်ပြီးတော့ ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့အတွက်ကို National Cyber Security and Forensics Solutions ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကနေ လုပ်ပေးပါမယ်။ သူတို့က ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးလုပ်ကြတဲ့ကုမ္ပဏီဆိုတော့ သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းထားတယ်။ တကယ်လို့များ နောက်ထပ် လိုအပ်လာမယ်ဆိုရင် နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတွေကို ထပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့အတွက် ကမ်းလှမ်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ နောက်တစ်ခုက အကယ်၍ အစိုးရ ဒါ မှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက သုံးစွဲသူရဲ့ ဒေတာ တောင်းလာတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို အစီအစဉ်ရှိလဲ။
ဖြေ ။ ဒါကတော့ ဥပဒေအပိုင်း ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ ဥပဒေပိုင်းဖြစ်သွားတော့ ကျွန်တော်တို့ MM Social ကို စပြီးတော့ ကနဦးလုပ်တဲ့အချိန်တည်းက ကျွန်တော်တို့ကို အကူအညီပေးနေတဲ့ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Biz Law က ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MM Social ရဲ့ တရားဝင် ဥပဒေအကြံပေးအနေနဲ့က သူတို့ ရှိမယ်။ အဲဒီတော့ အစိုးရကပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကပဲ ဖြစ်ဖြစ် မည်သည့်အကြောင်းရင်းနဲ့မဆို ကျွန်တော်တို့ဆီက ဒေတာတောင်းခံလာတယ်ဆိုရင် တည်ဆဲဥပဒေတွေအတိုင်း ဥပဒေအတွင်းထဲကနေ အလုပ်လုပ်မယ်။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့က ဒုစရိုက်အားပေးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒုစရိုက်မှုတစ်ခုခု၊ ရာဇ၀တ်မှုတစ်ခုခု မြောက်နေတယ်ဆိုရင် ဒေတာမထုတ်ပေးစရာ အကြောင်းတော့ မရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတည်ဆဲဥပဒေအောက်မှာ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ရာဇ၀တ်မမြောက်သေးတဲ့အချိန်လိုမျိုး သို့မဟုတ် မသေချာသေးတဲ့ အချိန်လိုမျိုးဆိုရင်တော့ တောင်းခံလာရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဥပဒေအကြံပေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လုပ်ဖို့များပါတယ်။
မေး ။ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစ်ကိုတို့ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိမယ့် အခြေအနေလေး ပြောပေးပါဦး ခင်ဗျ။
ဖြေ ။ မီဒီယာရော၊ ကျန်တဲ့ မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်မဆိုပေါ့နော်၊ သူတို့လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းလေးတွေ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သေချာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင် အမုန်းစကားနဲ့ ပတ်သက်ရင် Facebook က သတ်မှတ်ထားတာနဲ့ မတူပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အမုန်းစကားမျိုးကို အရေးယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မီဒီယာတွေအတွက်ကလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ Freedom of Speech ကို ကျွန်တော်တို့ သဘောကျတယ်။ အမုန်းစကား မဖြစ်သရွေ့ကတော့ လက်ခံသွားမှာပါ။
မေး ။ အကောင့်အတုတွေ၊ သတင်းမှားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို ကိုင်တွယ်သွားဖို့ရှိလဲ။
ဖြေ ။ အကောင့်အတုချည်းပဲက အဲဒီလောက် ဆိုးဆိုးရွားရွားမဖြစ်ဘူး။ အကောင့်အတုဖွင့်ပြီး သတင်းအမှား သို့မဟုတ် သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီလို သတင်းအတုတွေ ဖြစ်လာတယ်။ အကောင့် အတုမဖြစ်ဘူးဆိုရင် လူတွေက သူတို့ပြောတဲ့ စကားကို သူတို့တာဝန်ယူရလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ သတင်းမှားတွေ တိုက်ဖျက်တဲ့ ကမ်ပိန်းထဲမှာလည်း ပါခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒါတွေကိုလည်း တော်တော်လေး ကြပ်မတ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။
မေး ။ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ Cyber Crime တွေအတွက် တိုင်ကြားမယ်ဆိုရင် အဲဒီ အစီအစဉ်ကရော ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ ။ MM Social ကို သုံးရင်းနဲ့ အခက်အခဲရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကောင့်ဟက်ခံထိလို့ သို့မဟုတ် ကိုယ့်ဒေတာပေါက်ကြားသွားလို့ တိုင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ယောက်ယောက်က ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကိုယ့်ဒေတာတွေကို ဖွတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ဆီကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ တိုင်ကြားလို့ ရတဲ့ ဖောင်လေးတွေ ရှိလိမ့်မယ်။ မရဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆီကို Chat Box ကနေ တိုင်ကြားလို့ရမယ်။ ပြီးတော့ ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး တိုင်ကြားလို့ရမယ်။ အဲဒါမှ မရသေးဘူးဆိုရင် လူကိုယ်တိုင်လာပြီး တိုင်ကြားလို့ရမယ်။
မေး ။ ၀င်ငွေရှာတဲ့အပိုင်းမှာလဲ ကြော်ငြာကနေပဲ သွားမှာလား။
ဖြေ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီကနေပဲ သွားဖို့ ရှိပါတယ်။
မေး ။ နောက်တစ်ခုက MM Social ကို ဘယ်တော့ စပြီးသုံးလို့ရမလဲ။
ဖြေ ။ ကျွန်တော်တို့ စသုံးဖို့အတွက်က ၅ ရက်နေ့မတိုင်ခင်၊ သို့မဟုတ် ၅ ရက်နေ့မှာပေါ့။ စပြီးသုံးလို့ရမှာကတော့ Browser တွေ အပေါ်မှာ စပြီး သုံးလို့ရမယ်။ နောက်တစ်ခုက Mobile App တွေလည်း ထွက်လာဖို့ သိပ်မလိုတော့ပါဘူး။ ဘယ်လောက်လောက် ကြာမလဲဆိုရင် တစ်လ၀န်းကျင်လောက်တော့ ကြာမယ်။ လောလောဆယ်ကတော့ Browser တွေပေါ်မှာပဲ သုံးလို့ရဦးမယ်။
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ ဘာများဖြည့်စွက်ပြောချင်ပါသေးလဲ။
ဖြေ ။ ကျွန်တော်တို့က ခုမှ နှစ်လ၀န်းကျင်းပဲ သက်တမ်းရှိသေးတဲ့ Start-up လုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ပြည်ပလူမှုကွန်ရက်တွေက လုပ်လာတာ ဆယ်စုနှစ်ချီနေပြီ။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်ဘက်မှာ လိုအပ်ချက်တွေက ရှိနေဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပိုကောင်းလာအောင် အမြဲတမ်း ကြိုးစားနေမယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ပြည်တွင်းလူမှု ကွန်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အားပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted in InterviewsTagged MM SocialLeaveaComment on MM Social လူမှုကွန်ရက်၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ကိုရန်နိုင်မြင့်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted on September 4, 2018 September 5, 2018 by ဝေထွန်းနောင်
Facebook လူမှုကွန်ရက်က မြန်မာတပ်မတော်နှင့် ပတ်သက်သည့် အကောင့်နှင့် စာမျက်နှာတို့ကို ဖယ်ရှားခဲ့ပြီးနောက် VK ဆိုသည့် ရုရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် လူမှုကွန်ရက်တစ်ခု အနည်းငယ် ခေတ်စားလာသည်။ ယခုတစ်ဖန် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အညီ ရှိမည်ဆိုသည့် MM Social လူမှုကွန်ရက်တစ်ခု ပေါ်လာတော့မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းလူမှုကွန်ရက်မှ Facebook ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအတိုင်း ထပ်တူကျနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်မည်ဟု ပြောကြားထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် တည်ဆဲဥပဒေများအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သုံးစွဲသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုလည်း ပေါက်ကြားမှု မရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ထားပြီး သတင်းအမှားများ၊ အကောင့်တုများနှင့်လည်း ဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ်သွားမည်ဟု ပြောကြားထားသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာလူမှုကွန်ရက် တစ်ခုဖြစ်သည့် MM Social ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး Eleven ၏ စာဖတ်ပရိသတ်များ သိရှိစေရန် MM Social ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ကိုရန်နိုင်မြင့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း ထားပါသည်။
မေး ။ ပထဦးဆုံးအနေနဲ့ MM Social အကြောင်းနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျ။
ကိုရန်နိုင်မြင့် ။ MM Social က မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် လူမှုကွန်ရက် (Social Network) တစ်ခု ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ MM Social က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေ အောက်မှာပဲရှိမယ်။ နောက်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်တွေ အနေနဲ့ကတော့ လက်ရှိ ပြည်တွင်းမှာ ပြည်ပက လူမှုကွန်ရက်တွေကို အသုံးပြု မှီခိုနေရတယ်။ အဲဒီတွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ငွေ (ကြော်ငြာခ) တွေက အခွန်မပါဘူးပေါ့နော်။ အခွန်မရှိတဲ့အတွက် တိုင်းပြည်အတွက်က ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ နစ်နာမှုတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီဟာတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ တားဆီးချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လည်း ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သတင်းအချက်အလက် ပေါက်ကြားမှုတွေ တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့ အခါမှာ အဲဒါကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့က တားဆီးချင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲ စီးဆင်းရမယ့် သတင်းအချက်အလက်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲ စီးဆင်းစေချင်တယ်။ ဒါကတော့ ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့နော်။
မေး ။ MM Social က Facebook နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် (Feature) တွေ တူသလား။ ဒါမှမဟုတ် ပိုပြီးဆန်းသစ် ထားတာမျိုးတွေ ရှိသလား။ ဘယ်လို ပိုကောင်း ခွဲထွက်ထားလဲ သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ ။ MM Social က လူမှုကွန်ရက်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုမှာ ရှိသင့်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ ပါမယ်။ လူမှုကွန်ရက်တစ်ခု ဖြစ်ပြီးတော့ Like တွေ Comment တွေ မပါရင်လည်း မဖြစ်ပြန်ဘူး။ တခြားလူမှု ကွန်ရက်တွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေ အတိုင်းရှိမယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် (Rule) တွေကို သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအတိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေအတိုင်း သတ်မှတ်သွားဖို့ ရှိတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးတော့ ကွာခြားပါမယ်။ တခြား ကျွန်တော်တို့ ထပ်ထည့်မယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ စီးပွားရေး အစီအစဉ်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြောလို့မရသေးပါဘူး။
ဖြေ ။ ဖောင့်အနေနဲ့က သုံးတဲ့သူက ကြိုက်တာနဲ့ သုံးလို့ရတယ်။ ဇော်ဂျီနဲ့ သုံးလည်းရတယ်။ ယူနီကုတ်နဲ့ သုံးလည်းရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြန်ဖတ်ပြီဆိုရင် ယူနီကုတ်နဲ့ အမှန်မြင်ရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ Beta မှာလည်း အဲဒီဟာတွေက စမ်းကြည့်ပြီးသွားပြီ။ အကုန်လုံးလည်း ကြိုက်ကြတယ်။ အဆင်ပြေတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ သုံးတဲ့သူက ဇော်ဂျီနဲ့ ရိုက်ထည့်လိုက်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပြန်ပြလည်း ပြရော ယူနီကုတ်နဲ့ ပြန်ပြတယ်။ ဆိုလိုတာက ဖတ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ ဖတ်လို့ရတယ်။ ယူနီကုတ်ကို ဖတ်လို့ရတယ်။ ယူနီကုတ်ကို Word Font အနေနဲ့ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ထည့်ထားစရာ မလို ဘူး။ မည်သူမဆို ရေးတာက ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးရေး၊ ယူနီကုတ်နဲ့ရေးရေး ကြိုက်တာနဲ့ရေး ယူနီကုတ်နဲ့ အမှန်ပြပေးမယ်။
မေး ။ ဒေတာသိမ်းဆည်းမှု အပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပေးပါဦးခင်ဗျ။
ဖြေ ။ ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုအပိုင်း သို့မဟုတ် အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Infrastructure) ပိုင်းကတော့ ပြည်တွင်း Cloud ၀န်ဆောင်မှုကို သုံးထားတယ်။ AGD Communication ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကနေ သုံးထားတယ်။ ဒေတာတွေက သူတို့အဆောက်အအုံ (AGD Cloud) ထဲမှာပဲ ရှိပါလိမ့်မယ်။
မေး ။ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံမှုအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားပါသလဲ။
ဖြေ ။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နဲ့တကွ ဒီ MM Social တစ်ခုလုံးရဲ့ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ စပြီးရေးထဲကိုက ကျွန်တော်တို့ Cyber Wing ကုမ္ပဏီကနေ လုံခြုံရေးအသိ (Security Awareness) ရှိရှိနဲ့ ရေးတယ်။ အကယ်၍ အကြောင်းရင်း တစ်ခုခုကြောင့် လစ်ဟာသွားတာတစ်ခုခု ရှိမယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်ပြီးတော့ ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့ အတွက်ကို (National Cyber Security and Forensics Solutions ကုမ္ပဏီ လီမိတက်ကနေ လုပ်ပေးပါမယ်။ သူတို့က ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး လုပ်ကြတဲ့ ကုမ္ပဏီဆိုတော့ သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းထားတယ်။ တကယ်လို့များ နောက်ထပ် လိုအပ်လာမယ်ဆိုရင် နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတွေကို ထပ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်လည်စစ်ဆေး ပေးဖို့အတွက် ကမ်းလှမ်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ နောက်တစ်ခုက အကယ်၍ အစိုးရ ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက သုံးစွဲသူရဲ့ဒေတာ တောင်းလာတာမျိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို အစီအစဉ်ရှိလဲ။
ဖြေ ။ ဒါကတော့ ဥပဒေအပိုင်း ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ ဥပဒေပိုင်းဖြစ်သွားတော့ ကျွန်တော်တို့ MM Social ကို စပြီးတော့ ကနဦးလုပ်တဲ့ အချိန်တည်းက ကျွန်တော်တို့ကို အကူအညီပေးနေတဲ့ ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bizz Law က ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ MM Social ရဲ့ တရားဝင် ဥပဒေအကြံပေး အနေနဲ့က သူတို့ရှိမယ်။ အဲဒီတော့ အစိုးရကပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားအဖွဲ့အစည်း တွေကပဲဖြစ်ဖြစ် မည်သည့် အကြောင်းရင်းနဲ့မဆို ကျွန်တော်တို့ဆီက ဒေတာတောင်းခံ လာတယ်ဆိုရင် တည်ဆဲဥပဒေတွေအတိုင်း ဥပဒေအတွင်းထဲကနေ အလုပ်လုပ်မယ်။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့က ဒုစရိုက်အားပေးတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒုစရိုက်မှု တစ်ခုခု၊ ရာဇ၀တ်မှု တစ်ခုခု မြောက်နေတယ်ဆိုရင် ဒေတာမထုတ်ပေးစရာ အကြောင်းတော့ မရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ တည်ဆဲဥပဒေအောက်မှာ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရာဇ၀တ် မမြောက်သေးတဲ့ အချိန်လိုမျိုး သို့မဟုတ် မသေချာသေးတဲ့ အချိန်လိုမျိုး ဆိုရင်တော့ တောင်းခံလာရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဥပဒေအကြံပေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လုပ်ဖို့များပါတယ်။
မေး ။ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစ်ကိုတို့ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိမယ့် အခြေအနေလေး ပြောပေးပါဦးခင်ဗျ။
ဖြေ ။ မီဒီယာရော၊ ကျန်တဲ့ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက် မဆိုပေါ့နော်၊ သူတို့လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းလေးတွေ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သေချာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင် အမုန်းစကားနဲ့ ပတ်သက်ရင် Facebook က သတ်မှတ်ထားတာနဲ့ မတူပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အမုန်းစကားမျိုးကို အရေးယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မီဒီယာတွေ အတွက်ကလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ Freedom of Speech ကို ကျွန်တော်တို့ သဘောကျတယ်။ အမုန်းစကား မဖြစ်သရွေ့ကတော့ လက်ခံသွားမှာပါ။
ဖြေ ။ အကောင့်အတုချည်းပဲက အဲဒီလောက် ဆိုးဆိုးရွားရွား မဖြစ်ဘူး။ အကောင့်အတုဖွင့်ပြီး သတင်းအမှား သို့မဟုတ် သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ သတင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒီလို သတင်းအတုတွေ ဖြစ်လာတယ်။ အကောင့်အတု မဖြစ်ဘူးဆိုရင် လူတွေက သူတို့ပြောတဲ့ စကားကို သူတို့တာဝန်ယူရလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ကတော့ သတင်းမှားတွေ တိုက်ဖျက်တဲ့ ကမ်ပိန်းထဲမှာလည်း ပါခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒါတွေကိုလည်း တော်တော်လေး ကြပ်မတ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။
မေး ။ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ Cyber Crime တွေအတွက် တိုင်ကြားမယ်ဆိုရင် အဲဒီအစီအစဉ်ကရော ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ ။ MM Social ကို သုံးရင်းနဲ့ အခက်အခဲ ရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကောင့်ဟက်ခံထိလို့ သို့မဟုတ် ကိုယ့်ဒေတာ ပေါက်ကြားသွားလို့ တိုင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ယောက်ယောက်က ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကိုယ့်ဒေတာတွေကို ဖွတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ဆီကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ တိုင်ကြားလို့ရတဲ့ ဖောင်လေးတွေ ရှိလိမ့်မယ်။ မရဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆီကို Chat Box ကနေ တိုင်ကြားလို့ရမယ်။ ပြီးတော့ ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး တိုင်ကြားလို့ရမယ်။ အဲဒါမှ မရသေးဘူးဆိုရင် လူကိုယ်တိုင်လာပြီး တိုင်ကြားလို့ရမယ်။
မေး ။ ၀င်ငွေရှာတဲ့ အပိုင်းမှာလဲ ကြော်ငြာကနေပဲ သွားမှာလား။
ဖြေ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ လူမှုကွန်ရက် ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီကနေပဲ သွားဖို့ရှိပါတယ်။
မေး ။ နောက်တစ်ခုက MM Social ကို ဘယ်တော့စပြီး သုံးလို့ရမလဲ။
ဖြေ ။ ကျွန်တော်တို့ စသုံးဖို့အတွက်က ၅ ရက်နေ့မတိုင်ခင်၊ သို့မဟုတ် ၅ ရက်နေ့မှာပေါ့။ စပြီးသုံးလို့ ရမှာကတော့ Browser တွေ အပေါ်မှာ စပြီးသုံးလို့ရမယ်။ နောက်တစ်ခုက Mobile App တွေလည်း ထွက်လာဖို့ သိပ်မလိုတော့ပါဘူး။ ဘယ်လောက်လောက် ကြာမလဲဆိုရင် တစ်လ၀န်းကျင်လောက်တော့ ကြာမယ်။ လောလောဆယ်ကတော့ Browser တွေပေါ်မှာပဲ သုံးလို့ရဦးမယ်။
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ ဘာများဖြည့်စွက် ပြောချင်ပါသေးလဲ။
ဖြေ ။ ကျွန်တော်တို့က ခုမှ နှစ်လ၀န်းကျင်းပဲ သက်တမ်းရှိသေးတဲ့ Start-up လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ပြည်ပလူမှုကွန်ရက်တွေက လုပ်လာတာ ဆယ်စုနှစ်ချီနေပြီ။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်ဘက်မှာ လိုအပ်ချက်တွေက ရှိနေဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပိုကောင်းလာအောင် အမြဲတမ်း ကြိုးစားနေမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ပြည်တွင်းလူမှုကွန်ရက် ဖြစ်တဲ့အတွက် အားပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted in InterviewsTagged MM SocialLeaveaComment on မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲ စီးဆင်းရမယ့် သတင်းအချက်အလက်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲ စီးဆင်းစေချင်တယ် . . .
Posted on August 26, 2018 August 27, 2018 by ရွှန်းလဲ့ဝင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံပိုင်လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သည့် “မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း” ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် “Union of Burma Airways” အမည်ဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ရာ ယခုနှစ်တွင် နှစ် (၇၀) ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းသည် အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင် ဖိလစ်ပိုင်လေကြောင်းနှင့် Cathay Pacific လေကြောင်းလိုင်းတို့နောက် တတိယမြောက် သက်တမ်းအရင့်ဆုံး လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှစ၍ နိုင်ငံတကာသို့ စတင်ပြေးဆွဲခဲ့ရာ ယခုလတွင် သုံးနှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းအဖြစ် ကုမ္ပဏီအသွင် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၀န်ထမ်းများ၏ အတွေးအခေါ်မှအစ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ လေကြောင်းလိုင်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ “စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆု” ရရှိခဲ့ပါသည်။ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း၏ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာ ပြင်ပစီးပွားရေးအဖြစ် ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရ၊ ကျော်လွှားခဲ့ရသည့်အခက်အခဲများကို မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း၏ စီအီးအိုဖြစ်သူဦးသန်းထွန်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
မေး – နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်ကနေ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာပြင်ပ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု အဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံကို အရင်ဆုံး ပြောပြပေးပါ ။
ဖြေ – နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို မိမိခြေထောက်ပေါ် မိမိရပ်တည်နိုင်ရေးအစီအမံရဲ့ Autonomous ကာလအဖြစ် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတော်က ဘတ်ဂျက်ကို အပြည့်မပေးတော့ဘဲ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း သာချပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ် မှာတော့ လုံးဝချမပေးတော့ဘဲ ဘတ်ဂျက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် ။ လေကြောင်းလိုင်းအမည်ကိုလည်း မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပြီး လေကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို MIC ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထား ရယူကာ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီး နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း Board အဖွဲ့နဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် ။
မေး – ကုမ္ပဏီအသွင်ကူးပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ရပ်တည်ရမှု အခြေအနေကိုပြောပြပေးပါ။
ဖြေ – ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတော် ပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများအား မိမိခြေ ထောက်ပေါ် မိမိရပ်တည်နိုင်ရေး အစီအမံအရ အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းကို အဆင့် (၄)ဆင့်ဖြင့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းက တတိယအဆင့် ဖြစ်တဲ့ Corporatization အဆင့်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းအနေနဲ့ အရင်က “မြန်မာ့လေကြောင်း” အမည်နဲ့ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်အောက်မှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ်က နိုင်ငံတော် မှတစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းခန့် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာ ပြင်ပစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ကုမ္ပဏီအသွင်ဖွဲ့စည်းပြီး “မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း” ဆိုတဲ့အမည်သစ်နဲ့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပပြေးဆွဲနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ပြင်ပကနေ ကုမ္ပဏီအသွင် ကူးပြောင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ အရေးကြီးဆုံးနဲ့ ဦးစားပေးအဖြစ် ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ Mind Set ကိုပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။ အရင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ Manual စနစ်ကနေ IT စနစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်း အချိန်တိုအတွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ သက်တမ်းရင့် လေယာဉ်တွေနေရာမှာ GECAS ခေါ်တဲ့ အမေရိကန် GE ကုမ္ပဏီရဲ့ လေယာဉ်ငှားရမ်းရေး ကုမ္ပဏီခွဲကနေ ဘိုးရင်းလေယာဉ် ၁၀ စင်းကို လာ ရောက်ငှားရမ်းမြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ အခုအနေအထားမှာတော့ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် လေးစင်း ငှားရမ်းထားပြီး ပြည်ပ ငါးမြို့နဲ့ ပြည်တွင်း ၂၈ မြို့ကို ပြေးဆွဲနေပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ Air Bus ရဲ့ ATR ကုမ္ပဏီကလည်း ATR -72-600 လေယာဉ်ခြောက်စင်းကို ၀ယ်ငှားစနစ်နဲ့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ATR အကြီးစား အလုပ်ရုံတည်ထောင်ဖို့ ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
မေး – မြန်မာ အမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း အနေနဲ့ လေယာဉ်အသစ်တွေ ၀ယ်ယူတဲ့နေရာမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရဲ့ အကြံပြုချက်အချို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာများပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ – ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရဲ့ အကြံပြုချက်ဖြစ်တဲ့ လေယာဉ်ဝယ်ယူရေးမှာ အားနည်းချက် ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက အမေရိကန်ရဲ့ စီးပွားရေး အရေးယူပိတ်ဆို့မှုကြောင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ အစိုးရချေးငွေနဲ့ ခရီးသွား ပြည်သူတွေအတွက် MA-60 လေယာဉ်သုံးစင်းကို F-27 လေယာဉ်တွေနေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ၀ယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုး သားလေကြောင်းအနေနဲ့ ရှာဖွေရရှိတဲ့ဝင်ငွေရယ်၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်က ချေးငွေ ရယ်ပေါင်းပြီး ဒီလေယာဉ်သုံးစင်းအတွက် တိုးရင်းပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇ ဒသမ ၅၈ သန်းကိုလည်း ပြန်ပေးဆပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျန်ငွေတွေကို နိုင်ငံတော်က ဆက်လက်တာဝန်ယူပေးခဲ့လို့ ကျေးဇူးလည်းတင်ရပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ဘဏ်စာရင်းတွေ ဖွင့်ရတာကတော့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ပျံသန်းဆင်းသက်တဲ့အခါ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပြီးမှသာ ပျံသန်းဆင်းသက်ခွင့်ပြုတာကြောင့်ရယ်၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လက်မှတ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေခန့်ပြီး လက်မှတ်ရောင်းချတာမို့ လက်မှတ်ဖိုးငွေတွေ၊ လေယာဉ်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ပျံသန်းခ၊ Landing Parking Charges , Ground handling Charges တွေ ပေးချေဖို့ ICH ( IATA Clearing House) Member လျှောက်ထားရယူပြီး Electronic Banking နဲ့ ပေးချေရတာမို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ ၄၀ လောက်ရဲ့ ငွေကြေးနဲ့ လက်မှတ်ရောင်းချတာမို့ On Line ကနေ Credit Card နဲ့ ၀ယ်တာမို့ မဖြစ်မနေ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံမှာ ကုမ္ပဏီထောင်တာ၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်တာတွေ လုပ်ပြီးမှ ပျံသန်းခွင့်ရဖို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရတာမို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်း တန်ဖိုးဟာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ၉၈ ဒသမ ၅၉ ဘီလျံကျပ်သာရှိတာကနေ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ လူသားအရင်းအမြစ်မပါ ၁၇၁ ဒသမ ၅၃ ဘီလျံအထိရှိလာတာမို့ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ကျပ်ငွေ ၇၃ ဘီလျံအထိ တိုးမြှင့် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လစဉ် လေယာဉ်ငှားရမ်းခ၊ ၀ယ်ငှားစနစ်အရ လစဉ်ပေးဆပ်ရငွေဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၃ သန်းခန့် ရှိတဲ့အတွက် နှစ်စဉ် မြန်မာကျပ် ၇၀ ဘီလျံ ကျော်ပေးဆပ်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် လို့သာ နိုင်ငံတော်က လေယာဉ်တချို့ကို ၀ယ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် လေကြောင်းဝင်ငွေကနေ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာတောင် ဖြစ်ပါတယ်။
မေး – လက်ရှိမှာပျံသန်းနေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ်တွေနဲ့ တိုးချဲ့ပျံသန်းမယ့် ခရီးစဉ်တွေရှိရင်လည်း ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ – မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းအနေနဲ့ ပြည်တွင်း ၂၈ မြို့ ၊ ပြည်ပနိုင်ငံအနေနဲ့ ဟောင်ကောင်၊ စင်ကာပူ၊ ဘန်ကောက်၊ ချင်းမိုင်၊ ဖူးခက်၊ ဗုဒ္ဓဂယာအပြင် နိုင်ငံတော်က ခရီးသွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဗီဇာဖြေလျှော့မှုတွေကြောင့် တရုတ်ခရီးသွား ကုမ္ပဏီများနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံချန်ဒူးမြို့ကို တိုးချဲ့ပျံသန်းပြေးဆွဲဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
မေး – မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း အနေ နဲ့ နိုင်ငံတကာကို ထိုးဖောက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေက ဘာများဖြစ်မလဲရှင်။
ဖြေ – နိုင်ငံတကာကို ထိုးဖောက်ဖို့အဓိက ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခက်အခဲကတော့ မိမိလိုချင် တဲ့ဆင်းသက်ချိန် Slot Time ရရှိရေးဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်ကိုစရိတ်နည်း လေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ရော Premium လေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ပါ နှစ်မျိုးစလုံးရဲ့ကြားကနေ ထိုးဖောက်ဖို့ ကြိုးစားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး – လက်ရှိပျံသန်းနေတဲ့ ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေထဲမှာ လေယာဉ်အစင်းရေအများဆုံးနဲ့ ခရီးသည်ရရှိမှု အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကို ထိုးဖောက်နိုင်ဖို့၊ ဈေးကွက်မှာဦးဆောင်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်မှုတွေဟာ အခြားပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုကို ပိုပြီးပြင်းထန်စေမယ်လို့ ယူဆပါသလား။
ဖြေ – မြန်မာ အမျိုးသားလေကြောင်းဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာခရီးသည်ငါးသိန်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာခရီးသည်တစ်သန်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ခရီးသည် ၁ ဒသမ ၅ သန်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ အခု ၂၀၁၈ မှာ နှစ်သန်းရမယ်လို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ CAPA အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆင်းသက်တဲ့ နိုင်ငံတကာက လေကြောင်းလိုင်း ၂၈ လိုင်းမှာ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းရဲ့ ခရီးသည်ရရှိမှု Seat Capacity ဟာ တတိယအများဆုံး ရရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ အမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းဟာ IOSA Certificate ရရှိရေး ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် အာမခံငွေ အများကြီးသက်သာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးရရှိသလို နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းကြီးတွေနဲ့ Interline , Code Share ချိတ်ဆက်ပျံသန်းဖို့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ATR လေယာဉ်ပြင်အလုပ်ရုံအတွက် EASA approved ATR MRO လက်မှတ်ကို လာမယ့် စက်တင်ဘာလကုန်မှာ ရတော့မှာဖြစ်လို့ အခြားဝင်ငွေများလည်း တိုးတက်ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း အနေနဲ့ကတော့ အခြား ပြည်တွင်းက ဘယ်လေကြောင်းကိုမှ ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိပါဘူး။ မိမိကိုယ်ပဲ မိမိယှဉ်ပြိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား ပြည်တွင်း လေကြောင်းလိုင်းတွေကို ညီနောင်လေကြောင်းလိုင်းများအဖြစ် သဘောထားပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီမှုတွေ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သလို နောင်ကိုလည်း ကူညီပေးသွားဖို့ အသင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in InterviewsTagged မြန်မာ အမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းLeaveaComment on မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း၏ CEO ဦးသန်းထွန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted on August 21, 2018 August 22, 2018 by Eleven Media Group
Youth Inspire Talk အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် ကိုဖြိုးေ၀၀င်း (သတင်းထောက်ချုပ်)၊ မဖြူဖြူအောင်နှင့် ခရစ္စတီးနားခီ (ဓာတ်ပုံ – မျိုးထက်ပိုင်)
သြဂုတ် ၁၉ ရက်တွင် Eleven Media Group က တင်ဆက်ခဲ့သော Youth Inspire Talk အစီအစဉ်၌ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီနှင့် အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်မှ Board of Director မဖြူဖြူအောင်တို့၏ ပြောကြားချက်များ အနက်မှ အချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အစီအစဉ်တွင် ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီနဲ့ အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်မှ မဖြူဖြူအောင်တို့က အောင်မြင်မှုရရန် ကြိုးစားခဲ့ပုံ၊ အောင်မြင်မှုအပေါ် ၎င်းတို့၏ ခံယူချက်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍအတွက် အကြံပြုချက်များကို ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကောင်းစည်သူ – (National Management College မှ Journalism ကျောင်းသား)- အစ်မတို့ နှစ်ယောက်ကို မေးချင်တာက အခုချိန်မှာ လူငယ်တွေအနေနဲ့ Depression ၀င်တယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့ လူငယ်တွေအပေါ်ကို အစ်မတို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး အားပေးချင်သလဲ။ ပြီးတော့ ကြိုးစားနေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်။ သူ့အနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကရော မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းကရော အားပေးမှုတွေ မရတဲ့အခါ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ခံလာရတဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်ကျသွားတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို ဘယ်လိုအကောင်အထည် ဖော်ရမလဲ ဆိုတာကို အစ်မတို့ အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့ ပြောပြပေးပါ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ မကြိုးစားရသေးဘူး။ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို မရောက်သေးတဲ့ လူငယ်တွေအပေါ်မှာရော အစ်တို့အနေနဲ့ ဘာများပြောချင်သလဲ။
မဖြူဖြူအောင် (BOD, Aung The Mardi Gold Founder) – အစ်မအနေနဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်လေးကတော့ လူ့ဘ၀ရလာပြီဆိုရင် ဘ၀ကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ မဖြေရှင်းနိုင်ဘဲနဲ့ အရှုံးပေးတာလို့ပဲမြင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒါလေးက သေးသေးလေးပဲ ရှိသေးတယ်။ နောက်ထပ် အကြီးကြီးတွေ လာဦးမှာ။ လာဖို့အတွက် ဒီချိန်မှာ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး ဆိုလို့ရှိရင် ပိုပြီးတော့ ဆိုးတာတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဆိုရင် မဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတာတွေ ဘာတွေကို သူတို့ကို သူတို့မနိုင်လို့ပါ။ အဓိက,ကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကိုနိုင်အောင် မဆုံးမနိုင်တာပါပဲ။ ကိုယ့်စိတ်ကို နိုင်အောင် ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် အခုခေတ်မှာ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေမယ့် အရာတွေကို မထိကြည့်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ လူငယ်တွေ တော်တော်များများက ၁၆ နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင် လူကြီးဖြစ်သွားပြီ။ သူတို့စိတ်ကလေးတွေကိုက ၀ါဂွမ်းလေးတွေလို လွင့်နေတယ်။ ဘယ်ကိုကပ်လို့ ကပ်ရမလဲ မသိဘူး။ အဲဒီမှာ မှားလိုက်လို့ရှိရင် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး လွဲမှားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ အစ်မတို့ဆိုရင် အစ်မတို့မိဘတွေရဲ့ ဆုံးမမှုအောက်မှာ အမြဲတမ်းနေတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ကိုယ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရားတွေမှာ ဝေဖန်စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ပါ။ ကိုယ်ဘာဖြစ်နေမှန်း မသိဘဲနဲ့၊ ဘာကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျနေမှန်း မသိဘဲနဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာဖြစ်နေမှန်း မသိဘဲနဲ့တော့ ဘယ်သူမှ ကုပေးလို့မရဘူး။ ကိုယ့်မှာ ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်လာပြီ ဆိုရင်လည်း ရောဂါအတွက် ဆေးက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ သောက်ရမှာ။ သောက်ပြီးလို့ ရှိရင်လည်း ပျောက်တဲ့အနေအထားရောက်မှာ။ ဆေးစသောက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ နည်းနည်းခါးမှာ။ ကျန်းမာသွားတဲ့ အခါကျတော့ အဲဒါတွေက မလိုအပ်တော့ဘူးပေါ့။ အခုအချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျစရာ တွေကတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့အချိန်မှာ အလွယ်တကူ မဖြေရှင်းပါနဲ့။ ရေရှည်ကို ကြည့်ပြီးတော့ ဖြေရှင်းပါ။ ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သိအောင်လုပ်ထားပါ။ အဲဒီလို အကြောင်းအရာတွေမှာလည်း စတေးရတာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ မဖြူအဖေ ပြောတာရှိတယ်။ လူငယ်တွေဘ၀မှာ တန်ဖိုးအကြီးဆုံးက အချိန်မှာ အဲဒီနေရာမှာ အချိန်ကို ဘာနဲ့သတ်မှတ်လဲဆိုရင် အသက်နဲ့ပဲ သတ်မှတ်တယ်။ လူအသက် တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ် ကလေးလေးတွေ မွေးပြီဆိုရင် တစ်နာရီဆိုရင် သူ့အသက်က တစ်နာရီ၊ အဲဒီလိုပဲ လူငယ်တွေမှာလည်း သူတို့အတွက် အချိန်တွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ အစ်မတို့ ဆယ်ကျော်သက်တုန်းက ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာလေးတွေနဲ့ အခုသုံးနှစ်ကျော်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာလေးတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်လို့ရှိရင် ဘာမှမဖြစ်စလောက်လေး ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရှုံးမပေးပါနဲ့။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လည်း အားပေးမှုမခံရဘူး။ လက်တွဲကူညီမှု မခံရဘူး။ သူတို့လက်တွဲကူညီမှု မခံရတဲ့သူက ပိုပြီးတော့ ထက်မြက်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားကိုးလိုစိတ်ရှိတယ်။ မိဘနောက်ခံ ရှိတဲ့သူတွေထက်စာရင် အရန်အသင့် လုပ်ပေးတဲ့သူထက် အရန်အသင့် မလုပ်ပေးခံရတဲ့သူက ပိုပြီးတော်လေ့ရှိတယ်။ သူက သူကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်ရတာကိုး။ မိဘရှိရင်တော့ မိဘက နည်းနည်းလုပ်ပေးတာပေါ့။ အဲဒီလူတွေက ပိုပြီးတော့ အောင်မြင်လေ့ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ အစ်မအကြံပေးချင်တာက လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလဲ ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကို အရည်အချင်းလေးတွေ အတွင်းထဲမှာ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအရည်အချင်းလေးတွေ ရှိနေတာကို မသိဘဲနဲ့ သိမ်ငယ်စိတ် ကြောက်တဲ့စိတ်ရှိလို့ရှိရင် သူများတွေ ချီးကျူးခံရချင်တဲ့စိတ်တွေ လွှမ်းမိုးနေတယ်။ သူများတွေ ချီးကျူးခံရဖို့ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့် ချီးကျူးခံရဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဥပမာပေးရရင် ကျောက်ခဲ နှစ်ခုကို ဖြည်းဖြည်းချင်းထုရင် မီးထွက်လာ ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မသိဘူး။ မြန်မြန်ပွတ်လေ၊ များများပွတ်ရင် မီးပိုထွက်လာ ပြီးတော့ အဲဒီမီးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်း ကိုယ်ပဲခံစားရမယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ကျောက်ခဲနှစ်ခု ဥပမာလိုပဲ။ ဒီအချိန်မှာ ငါက မီးထွက်ဖို့အတွက် များများအပွတ်ခံရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေများလာရင် အောင်မြင်တဲ့လမ်းစက မြင်ရပြီ။ ဘ၀မှာလည်း ဒီလိုဘဲ။ Polish ဆိုတဲ့ အစ်မစာဖတ်တယ်။ သူ့ရဲ့လိုဂိုကာလာတွေက အဖြူအမဲနဲ့လုပ်တာ။ သူ့ရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ မေးကြည့်တော့ သူ့ရဲ့ လိုဂိုကာလာကို အဖြူနဲ့လုပ်သလဲလို့ မေးကြည့်တော့ သူအဲဒီတုန်းက ဆေးဖိုးမတတ်နိုင်လို့ အဖြူအမည်းနဲ့ လုပ်ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒါက ကမ္ဘာမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ လိုဂိုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကိုယ်က အားနည်းချက်လို ဖြစ်ပေမဲ့ တစ်ဖက်လူအမြင်မှာ အားသာချက်လို့ဖြစ်တယ်။ ဘာမှမမျှော်လင့်ပါနဲ့။ ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဖို့ပဲ မျှော်လင့်ပါ။ အခုအစ်မ အကြံပေးချင်တာ ဘာသာရေးပါ။ အသက်ငယ်တဲ့ အရွယ်မှာ လောကီပြီးရင် လောကုတ္တရာဆိုတာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အခုလူငယ်အရွယ်မှာ တရားလေးထိုင်ပြီးတော့ စိတ်ကိုငြိမ်အောင် ထားနိုင်မှရမယ်။ စိတ်က အရမ်းဒေါသထွက်နေတဲ့ အချိန်မှာ အမှားဆိုတာ တစ်မိနစ်အတွင်းမှာဖြစ်တယ်။ အမှားဆိုတာ တစ်မိနစ် ငါးမိနစ်ဆိုတာ အကြာဆုံးပဲ။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဖြစ်သွားတာ။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ အတွေးတွေက ဖြစ်သွားတာ။ အဲဒီလိုမကောင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ပြန်လည်ပြီးတော့ ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာ စိတ်ငြိမ်မှရပါမယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘာသာရေး တစ်ခုကိုလည်း လေ့လာလိုက်စား စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ဒေါသထွက်လာမယ့်အရာ တစ်ခုခုရှိရင် ဘာသာရေးလေးနဲ့ ဖြေရှင်းတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ လွဲမှားတဲ့အရာ မဖြစ်အောင်ပေါ့။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကျလို့ရှိရင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေ၊ ကိုယ့်ဘ၀အတွက် ဘယ်သူတွေ စိတ်ဓာတ်ကျနေလဲ။ ကိုယ်က ထမင်းငတ်ခဲ့ဖူးလား။ လမ်းဘေးမှာ အိပ်ခဲ့ရပြီးပြီလား။ ဒါမျိုးလေးတွေကို ပြန်ပြီးစဉ်းစား ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒါမျိုးလေးတွေက တကယ်တမ်းကျတော့ စိတ်သက်သာရာရတယ်။ ကိုယ်ပူပန်နေတာကို ဘယ်သူမှ မသိဘူး။ ကိုယ်ပဲသိတယ်။ အဲအတွက် အဲဒါတွေကို အရှုံးပေးလိုက်လို့ရှိရင် ကိုယ့်အတွက် အောင်မြင်မှုလမ်းစတွေက လမ်းပိတ်သွားမယ်။ အဲဒါလေး တစ်ခုကို ဖြေရှင်းလိုက်လို့ အောင်မြင်သွားတဲ့ အခါကျလို့ရှိရင် နောက်ထပ် အရှိန်အဟုန်များစွာနဲ့ တိုးတက်လာမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် လူငယ်တွေကို အစ်မအနေနဲ့ အစ်မသိသလောက်လေးနဲ့ မျှဝေအကြံပေး ချင်တာပါ။
ခရစ္စတီးနားခီ (Producer @ Film Director) – ညီမ(မဖြူ)ဖြေသွားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ခွန်အားလည်း ဖြစ်စေတယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ အစ်မကကျတော့ အစ်မရဲ့ အတွေ့ကြုံလေး တစ်ခုနဲ့ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ မောင်လေးပြောတဲ့ Depression ပေါ့။ တကယ်တော့ အစ်မက Depression ကို ခံစားနေရတာက တစ်သက်လုံးလို့တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Depression ဆိုတာ ရောဂါတစ်မျိုးပဲ။ Depression ဆိုတာ လူကြောက်တယ်။ အစ်မ အရမ်းကြောက်တယ်။ အခုလိုမျိုး လာဖြေရတာကိုက ညဆိုရင် အိပ်မပျော်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုရင် အစ်မအလုပ်အပေါ်မှာ တိုးတက်ချင်လို့ လူရှေ့ထွက်ရတဲ့ အဆင့်ကို ရင်ဆိုင်ရတယ်။ အစ်မခုနက ပွဲမစခင်တုန်းကတော့ ပွဲစတော့မယ်ဆိုရင် သွားပြီးသား အိမ်သာကို ထပ်ပြီးသွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ ကြောက်လို့။ အစ်မကိုယ်အစ်မ လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာ Depression နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာတွေဖတ်တဲ့ အခါမှာ စိတ်ဓာတ်တွေလည်း ခဏခဏကျဖူးတယ်။ ပြီးတော့ လူတွေနဲ့လည်း သိပ်မတွေ့ချင်ဘူး။ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ကို အစ်မအရမ်းကြောက်တယ်။ နောက်ကျတော့ အစ်မဒီဟာကို ရင်ဆိုင်နေရတယ် ဆိုတာကို သိလာတဲ့ အခါမှာ အစ်မဘာကို စဉ်းစားလဲဆိုတော့ သေပစ်လိုက်မလား။ ခဏခဏလည်း သေဖို့စဉ်းစားဖူးတယ်။ အစ်မရဲ့ အနုပညာ အလုပ်နဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ၁၀ နှစ်လာနေတဲ့အခါ အစ်မရဲ့ စားဝတ်နေရေးရော၊ ဒုက္ခတွေ အများကြီး ရင်ဆိုင်လာရတဲ့ အချိန်မှာ သားလည်းဆုံးခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီဒဏ်တွေက အစ်မဆီကို ရောက်လာပြီးရင် အစ်မညကျရင် အိပ်မပျော်ဘူး။ ညအိပ်မပျော်ဘဲ နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင် ဘာကိုရင်ဆိုင်ရသလဲဆိုရင် အူကြောင်ကြောင်တွေ ဖြစ်တယ်။ အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်ရတဲ့ကြားထဲမှာ အခြေအနေအရ အဆင်ပြေအောင် ပြောဆိုနေရတဲ့ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့ အချိန်ကျရင် အဲဒီလိုမျိုး တစ်ခုပေါ့။ နောက်တစ်ခုက အစ်မသားလေးဆုံးတော့ ကလေးရှိတဲ့ အစ်မသူငယ်ချင်းတွေက ပြောတယ်။ သားသမီးဆိုတာ ရတနာတဲ့။ ထိုက်မှရတာတဲ့။ သူ့စကားအတိုင်းအတာက ဘယ်ရောက်သွားတယ်တော့ အစ်မ မသိဘူး။ အစ်မမှာကတော့ ဘုန်းဘုန်းကို လဲသွားတာ။ ငါက မထိုက်ဘူးလားဆိုတဲ့ Feeling လေးဖြစ်သွားတယ်။ ဒါလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အမြဲတမ်းကြုံနေရတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ နဂိုကလည်း ဒီလိုမျိုးကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ခွန်အားမရှိရတဲ့ ကြားထဲကမှ စားဝတ်နေရေးကလည်း အဆင်မပြေ၊ အရာရာအားလုံး အဆင်မပြေနေရတဲ့ ကြားထဲကမှ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် သေပစ်လိုက်ရမှာလား။ ရုပ်ရှင်ကလည်း ရိုက်လို့မရ။ ဒုက္ခက ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာ အစ်မကနှစ်မျိုးပဲ တွေးတယ်။ သေပြီးရင်လေ ဖြေရှင်းလို့ မရတော့ဘူး။ မသေခင်တုန်းကတော့ အစ်မတို့မှာ ကြိုးစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ငါဒီလိုလူမျိုး မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ဟာကို ကိုယ့်ကိုနှိမ့်ချခဲ့တဲ့သူ၊ ကိုယ့်ကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ သူတွေအားလုံးကို ဖြေရှင်းပြီး ပြောဖို့အတွက် ရှိသေးတယ်။
သေသွားပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ အစ်မတို့ဖြေရှင်းဖို့ မရှိတော့ဘူး။ အနုပညာသမားဆိုတော့ ပိုဆိုးတယ်။ သေသွားပြီးရင် နာမည်ကျန်မှာလား၊ မကျန်ဘူးလားဆိုတဲ့ (Lagacy) လို့ ခေါ်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်။ အခုအစ်မတို့ကို မြင်ဖူးတွေ့ဖူးတဲ့သူတွေ၊ အစ်မတို့ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေက အစ်မတို့ကို ချစ်တယ်။ ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ်ပြောကြပေမယ့် နောက်အနှစ် ၂၀၊ ၃၀၊ ၄၀ ကြာသွားလို့ အစ်မတို့ သေသွားတဲ့အခါကျရင် Next Generation လူငယ်တွေက ပညာတွေ ပိုတိုးတက်လာလို့ရှိရင် လူတွေက အစ်မတို့ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်လို့ရှိရင် ဒီလူတွေရဲ့ဟာ ကောင်းရဲ့လား။ တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရဲ့လားဆိုတာတွေက Judge ကိုပါခံရတော့မှာ။ အဲဒီခါကျရင် အစ်မစဉ်းစားတယ် ငါသေသွားပြီးလို့ရှိရင် ငါရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေကလည်း မပြရသေးဘူး။ ရုပ်ရှင်ကလည်း မရိုက်ရဘူးဆိုရင် ငါကလူရှုံးဘ၀နဲ့သေရ တော့မယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း ပြောသလောက်တော့ မလွယ်ပါဘူး။ Depression ဆိုတာကလည်း ရောဂါတစ်မျိုးပဲဆိုတာကိုလည်း လက်ခံရမယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းတော့ ရှိတာပေါ့။ ညီမ (မဖြူ) ပြောသွားတဲ့အထဲမှာ အစ်မကိုယ်တိုင် ကျင့်ထားတာတော့ ဘာသာတရားပေါ့။ ဆုတ်ကိုင်စရာ ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားလာရတဲ့အချိန်မှာတော့ အစ်မဘုရားကိုပဲ ပြေးကပ်လိုက်မိတယ်။ ဘုရားကို ပထမကပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ အရမ်းပူပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အစ်မလိုချင်စိတ်နဲ့ ကပ်ရတာ။ ကပ်တော့ မဖြစ်တော့ ဒေါသပိုထွက်တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါကျရင် ရတနာဆိုတာထိုက်မှရတာဆိုတော့ ငါ့ကျတော့ ဘာလို့မရတာလဲဆိုတဲ့ ဒီစိတ်တွေကို ခံစားရတာပေါ့။ ဆိုတော့ ဒီကောင်းခြင်း၊ မကောင်း ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေဟာ နေ့တိုင်းမှာ ရှိနေတော့ စိတ်ကလေး သာယာနေတဲ့နေ့ကျရင် အေးဆေးပဲ။ စိတ်မသာယာတဲ့နေ့ကျရင်တော့ အဲဒီဟာကြီးက အရမ်းခံစားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာသာတရားမှာ ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ နားလည်လာတယ်။ ဘုရားကိုလာလို့ရှိရင် မဇ္ဈိမစိတ်ကို မွေးချင်တယ်။ အကုသိုလ်စိတ်ကို နည်းချင်တယ်ဆိုတော့ အေးချမ်းရာအေးချမ်းကြောင်း ကိုရှာလာတယ်။ စိတ်ကို ဘယ်ဟာကအနှောင့် အယှက်ပေးနေလဲ။ Facebook ကိုကြည့်တာများလို့ ဖြစ်နေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ရှောင်လို့ရတဲ့ အရာလေးတွေရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ အစ်မရဲ့ လက်တွေ့လုပ်ထားတဲ့ ဟာလေးတွေမှာပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက မောင်လေးပြောတဲ့ ကြိုးစားတယ်။ ကြိုးစားတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ကြိုးစားကြိုးစား ကောင်းတယ်လို့အပြော မခံရတဲ့အချိန်မှာ အစ်မဒီနေ့မနက်ပဲ ကိုယ်တွေ့ခံလာရသေးတယ်။ ကိုယ်တွေ့ခံလာရတယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောချင်သလဲဆိုတော့ အစ်မအနေအထားက ပရိသတ်က လက်ခံလာတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တော့ အစ်မကို ကြော်ငြာလေးတွေလာအပ်ကြတယ်။ ကြော်ငြာကလည်း အခု ၅၀ လောက် လာအပ်တာမှ တစ်ခုနှစ်ခုမယူဘူးဆိုတာက ကြောငြာဆိုလို့ရှိရင် Brand တော်တော်များများရဲ့ အတွေးဘာလဲဆိုရင် ဒါကြီးကို ထုတ်ထုတ်ပြောရမယ်ပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် သီချင်းတွေပဲ ဆိုရမယ်ပေါ့။ ဆိုတော့ အစ်မကိုယ့် (Course Supplize ) မလိုက်နိုင်တော့ လိုက်နိုင်မယ့်ဟာလေးကိုပဲ လိုတိုးပိုလျှော့ပေါ့။ အနုပညာသမားက ကိုယ်လိုချင်ရင် လျှော့ရတာများတယ်။ သူလိုချင်တဲ့ဟာတွေကို အစ်မကြိုးစားပြီးတော့ လုပ်ပေးတယ်။ အဓိက,ကတော့ အစ်မအနုပညာကို ယုံကြည်လို့ လာအပ်တဲ့သူတွေများတယ်။ အစ်မအနုပညာကိုယုံကြည်လို့ လာအပ်တယ်ဆိုရင် အစ်မကို ယုံလိုက်တော့၊ အဲဒီလိုလည်း မယုံချင်ပြန်ဘူး။ Taste မတူတဲ့သူကို အစ်မရိုက်ထားတဲ့ ကြော်ငြာသွားပြတော့ မကြိုက်ပြန်ဘူး။ မကြိုက်တော့ ဒီကပြီးသွားရင် အစ်မစကားသွားပြောရဦးမှာ။ မကြိုက်တဲ့အပြင်ကို မနက်ကပြန်ကြားရတဲ့ အရာတွေက တော်တော်စိတ်မကောင်းဘူး။ တော်တော်လည်း ကြိုးစားထားတယ်။ စေတနာလည်း ထည့်ထားတယ်။ အစ်မက ပုတ်ပြတ်ယူပေမယ့် ဘယ်လိုယူထားလိုက်မယ်တို့ ဘယ်လိုငါ့အတွက်ကျန်အောင် လုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အစ်မက လုပ်လိုက်ချင်တာ။ ရိုက်လိုက်ချင်တာ။ ကောင်းလိုက်ချင်တာ။ အစ်မတို့ရိုက်လို့ရတဲ့ အနေအထားလေးကနေ ဒီလောက်လုပ်နေတဲ့ကြားထဲကမှ ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အစ်မပြောပြချင်တာက ဒါဟာအမြဲရင် ဆိုင်ရမယ့်အရာဆိုတာ သိလာတယ်။ မဖြစ်သေးလို့ အပြောခံရတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်နေရင်လည်း အပြောခံရမှာပဲ။ သူ့အကြိုက်မတွေ့ရင် ကိုယ်ရင်ဆိုင်နေရမှာပါဆိုတဲ့ အဲတစ်ခုသိလာတယ်။ ဆိုတော့ လူကြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အစ်မက Owner ကို ထိပ်တိုက်သွားပြောလေ့ မရှိဘူး။ အလုပ်လက်ခံတာက မန်နေဂျာတွေရှိတယ်။ အစ်မက အနုပညာ အလုပ်လေးပဲလုပ်ချင်တာ။ ငွေရေးကြေးရေး စကားတွေလည်း မပြောချင်ဘူး။ သွားပြောရမယ်ဆိုတော့ သူ့ကိုကိုယ် ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့ ပြောရင်းနဲ့တောင် လက်ဖျားတွေ အေးလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ သွားတွေ့ရမှာပဲလေ။ အဖြေတစ်ခု ထွက်ဖို့လိုနေပြီ။ ဆိုတော့ အဲဒါတစ်ခု။ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ဖြတ်လိုက်ပါ လုပ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာ အခုနက မောင်လေးပြောသလို အစ်မအခု အထိရင်ဆိုင်နေရတာနဲ့ ကွက်တိပဲဆိုတော့ ကလေးတွေ၊ လူငယ်တွေ ကြိုးစားနေဆဲမှ မဟုတ်ဘူး။ ကြိုးစားပြီး ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုးစားနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဘ၀လုံးမှာ ရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာ ဖြစ်သွားပြီ။ ခုနက အစ်မပြောသလို သေမလား။ ဒါမှမဟုတ် ရင်ရှေ့ဆက်မလားဆိုတဲ့ ဟာကရှိတယ်။ ရှေ့ဆက်မှပဲ အစ်မရမယ်ဆိုရင်တော့ သေတဲ့ဟာက အဖြေမဟုတ်တော့ဘူး။ အစ်မထိပ်တိုက်တွေ့ရတော့မယ်။ အစ်မ အနေနဲ့ကတော့ အဲဒီလိုပဲ အကြံပေးပါရစေ။
မေဟန်နီဆွေ (National Management Collage မှ Journalism ကျောင်းသူ)-အစ်မ ခရစ္စတီနားခီကို မေးချင်ပါတယ်။ အစ်မအနေနဲ့ ကွာခြားတဲ့စနစ်နှစ်ခုကို လေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့။ ဒီကနေပြီးတော့ အမေရိကမှာလည်း သွားရောက်လေ့လာတယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတူညီတဲ့ဥစ္စာကို ဘယ်လိုမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်ခဲ့ရသလဲ။ နောက်တစ်ခါ မဖြူကို မေးချင်ပါတယ်။ အစ်မရဲ့မိဘတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ ရွှေလုပ်ငန်းကို လုပ်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒါမှာ အစ်မအနေနဲ့ ရွှေလုပ်ငန်းအပြင်ကို စီးပွား ရေးနယ်ပယ်မှာဖြစ်ဖြစ် အခြားလုပ်ချင်တာများ ရှိခဲ့ဖူးလား။ အဲဒါကိုမလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက် အခုနောင်တရတာမျိုး ရှိလား။ ငါသာ ငါလုပ်ချင်တဲ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ အခြားတစ်ခုကို လုပ်ပြီးဆိုရင် ဒီထက်ပိုပြီး တိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့ နောင်တရတာမျိုးတွေရှိလား။
ခရစ္စတီးနားခီ (Producer & Film Director ) မတူညီတဲ့ နှစ်ခုဆိုပေမယ့် အစ်မက ဒီမှာမွေးသွားတာလေ။ ဒီအခါအထာ ဒီဓလေ့ထုံးစံတွေကို မိဘကလည်းဗမာဆိုတော့ သိတယ်။ ဗမာဓလေ့ထုံးစံတွေကိုလည်း သိတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတူညီတဲ့ဟာနှစ်ခုကို ညှိရတဲ့အခါ ဟိုဘက် (အမေရိကန်) ကို သွားရတဲ့အခါ ညှိရတာက ပိုလွယ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အစ်မမှာ မတူညီဘူး။ အားနာတဲ့အခါကျတော့ ဘာရှိလဲဆိုတော့ အစ်မတို့ဒီမှာကတော့ ကျောင်းတက်တဲ့အခါကျတော့ ဆရာမကို ပြောရတယ်။ ရှူးရှူးပေါက်မယ်တို့ ခွင့်ပြုပါဦးတို့ ပြောရတာပေါ့။ အဲဒီလို ပြောရတဲ့အရာတွေကို ဒီမှာက ကျင့်ဝတ်တစ်ခု သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဟိုဘက်ရောက်တဲ့အခါရောက်တော့ သွားချင်လည်း မသွားဘူး။ ဒီအတိုင်းကြောက်ပြီးတော့ မပြောဘူး။ ဒါဟာ မကောင်းတဲ့အားနာတာဆိုတာကို နောက်ပိုင်းမှာ တဖြည်းဖြည်း သိလာတယ်။ လေးစားသမှုနဲ့ မလေးစားသမှုဆိုတာ ဘယ်ဟာကွာလဲဆိုတာကို ဟိုဘက်ရောက်သွားတဲ့အခါ နားလည်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဟိုဘက်ဘာကွာသလဲဆိုတော့ ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်း ပြောကြတယ်။ ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ ခုနက Attack မပါဘူး။ Bullying လုပ်တာလည်း မပါဘူး။ နင့်အသက် ဘယ်လောက်တို့ နင့်ရုပ်ဘယ်လို ဖြစ်နေတာတို့ပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုး ဘယ်တော့မှ မပြောဘူး။ Privacy ဆိုတဲ့အရာကိုလည်း သူတို့က အရမ်းသိတယ်။ မရှိဘူးလို့တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ ရှိတယ်ရှောင်လို့ရတယ်။ လူနည်းစုပဲ ဖြစ်နေတာကိုး။ ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ်က ရှောင်ရတာလွယ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ အစ်မတို့က ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်ကျရင် အစ်မတို့ပြောတဲ့ Story တွေ ဘာတွေကို ထပြောရတယ်။ ပြောပြီးလို့ ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် အစ်မတို့ ဗီဒီယိုနဲ့ ကြည့်ရတယ်။ ကြည့်ပြီးလို့ ကျောင်းသားတွေ ၁၇ ယောက် ၁၈ ယောက်တို့ ရှိတယ်ဆိုရင် ၁၇ နှစ်ယောက် ၁၈ ယောက်လုံးက ဒီဟာကိုဆွေးနွေးကြရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က Personal Attack လုံးဝမပါဘဲနဲ့ Criticism ကို ကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ် သူတို့က။ အစ်မအခက် အခဲကကျတော့ အစ်မကမပြောရဲဘူး။ အစ်မက ကြောက်တာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အစ်မတို့ဆီမှာ လက်ထောင်ပြီးတော့ပြောတဲ့ အလေ့အထလည်းမရှိတော့ အားနည်းတယ်။ ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်ထားလဲဆိုတော့ 10 Percent လျှော့မယ်၊ Course Participation မရှိဘူး။ ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိရင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့မယ်ဆိုတော့ အစ်မက ၁၀ မှတ်တော့ အလျှော့မခံနိုင်ဘူး။ အစ်မက အရဲစွန့်ပြီးတော့ ပြောရတာပေါ့။ သူတို့ဆီမှာ အလေ့အကျင့်ကောင်းလေးတွေ ရှိတယ်။ မကောင်းတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာက အစ်မတို့လူ ငယ်တွေအနေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင် အရမ်းမများကြီးမရှိဘူးလို့ အစ်မကမြင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ တန်းစီတယ်။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ထိုင်တဲ့ဟာက လက်ခံလို့ရတယ်။ ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်။ အစ်မအရွယ်နဲ့လည်း ပြောင်းလိုက်လို့ အဆင်ပြေတယ်။ စနစ်တစ်ခုက အသစ်တစ်ခုကို ပြောင်းရတယ်ဆိုပေမဲ့ ပြောင်းရတာလွယ်တယ်။ ဒီဘက်က စနစ်က အားနာတယ်ဆိုတာ မကောင်းဘူး။ မအားနာပဲ ဗွင်းဗွင်းရှင်းရှင်း နေထိုင်တယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ကရောမရောက်ရင်ရော မလိုကျင့်ရတာပေါ့။ ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့။ အစ်မ အစားအသောက်လေးတစ်ခုနဲ့ပဲ ယှဉ်ပြောပြမယ်။ အစ်မမြင်ဖူးတယ်။ မြန်မာတော်တော်များများတော့ မဟုတ်ဘူး။ တချို့က ဘာလဲဆိုတော့ ငါတို့က ချိစ့်မကြိုက်ဘူး။ ငါးပိပဲကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တော့ မရှိဘူး။ အစ်မက ချိစ့် လည်းစားတယ်။ ငပိလည်းစားတယ်။ အစ်မကကျတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသစ်အဆန်းလေးဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကို စမ်းကြည့်မယ်။ စားကြည့်မယ်။ ကြိုက်ရင် ကြိုက်မှာပဲ။ ဆိုတော့ အဲဒီလိုနိုင်ငံကို ရောက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ လေ့လာစူးစမ်းခွင့်က လုပ်ချင်ရင်ပိုပြီးတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အစ်မနိုင်ငံခြားသွားတယ်။ အမေရိကတော့ မဟုတ်ဘူး။ အမေရိကားကို သွားတယ်ဆိုတာက သူတို့နဲ့ အကျွမ်းတ၀င်စေဖို့ အတွက်သွားတာ။ အစ်မနိုင်ငံခြားတစ်ခုကိုသွားလို့ရှိရင် အစ်မဘယ်တော့မှ အဆောက်အအုံလှလှကြီးရှေ့မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ အဲလောက်အဆင့်ကို ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး။ အစ်မနိုင်ငံခြားတစ်ခုကို သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဘာလဲ။ သူတို့ ဗွင်းဗွင်းရှင်းရှင်း ပြောတယ်။ သူတို့အစားအသောက်ကဘာလဲ။ အစားအသောက်ဆိုရင်တော့ ကြက်သားကင် စားမယ်ဆိုရင်တောင် ဒီနိုင်ငံက ကြက်သားကင်မှ စားချင်တာ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘယ်လိုအရသာလဲ သူတို့က မဆလာကဲလား။ သူတို့ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ။ ပြင်သစ်တို့ဘာတို့မှာဆိုလို့ရှိရင် သိပ်အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်။ လက်မှုပညာတွေက အရမ်းထွန်းကားတယ်။ အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ လက်မှုပညာ အရမ်းထွန်းကားတယ်။ ဟုတ်ပြီ။ သူတို့က ရှေးရိုးစွဲတွေလား။ အဲဒီအခါဆိုလို့ရှိရင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေသွားတဲ့ Bar တစ်ခုကို သွားလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ဖင်ပြောင်နဲ့ ကနေကြတာ။ ပြောချင်တာက ခေတ်လည်းမီတယ်။ ဒါပဲ။ အဲလိုဟာမျိုးကိုမှ သဘောကျတာ။ အဲလိုလေ့လာပြီးရင် ကောင်းတာကိုတော့ အစ်မယူလိုက်တယ်။ မကောင်းတဲ့ဟာ ကိုယ်နဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ဟာကိုကျတော့ မယူတော့ဘူး။ အဲဒီနည်းနဲ့ပဲ အစ်မဟိုဘက်မှာ အဆင်ပြေလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။
ဖြူဖြူအောင် (BOD, Aung Thamardi , Gold Founder) ညီမလေးတို့မေးတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေကို အမြဲတမ်းဖြေရလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့က မိဘတွေလုပ်ငန်းကို မလုပ်ချင်ဘူး။ သူတို့ ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ ကွဲပြားလဲဆိုတော့ နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ မိဘက လခစားဝန်ထမ်း ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ကလုပ် မပေးနိုင်ဘူး။ ဒါကတစ်ပိုင်း။ နောက်တစ်ခါ မိဘက လုပ်ငန်းရှိတယ်။ လုပ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာကတစ်ပိုင်း။ နှစ်ပိုင်းပြောချင်တယ်။ အစ်မအဓိကပြောချင်တာကတော့ အပင်တစ်ပင်က အသီးလည်းသီးနေပြီ အရိပ်လည်းရနေပြီဆိုရင် အဲဒီအပင်ကအသီးကို ကိုယ်ကစား ဖို့ပဲကျန်တယ်။ ထုပ်ပိုးပြီး ရောင်းစားမယ်လို့ ကျန်တယ်။ အမေ့ရဲ့ သစ်ပင်ကိုမကြိုက်ဘူး။ ခုတ်လည်းပြီးတော့ အသစ်ပြန်စိုက်မလား။ အဲဒီမှာ ကွာခြားတယ်။ ဘာကွာလဲဆိုတော့ အချိန်ကွာခြားတယ်။ အဲဒီ ကွာခြားတဲ့ အချိန်ကိုပေးရတဲ့အခါမှာကျတော့ သားကဒါကို ၀ါသနာမပါဘူး။ သမီးက ၀ါသနာမပါဘူး။ တကယ်တမ်းကတော့ ဘယ်သူမှ ၀ါသနာကို ဘယ်သူမှ ထည့်မပေးလိုက်ဘူးဆိုတာကို အစ်မထင်တယ်။ အစ်မကျတော့ ဘာဖြစ်လို့ ၀ါသနာပါသွားလဲဆိုရင် လုပ်ရင်းနဲ့ ၀ါသနာ ပါသွားတယ်။ တချို့မလုပ်ချင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် ၀ါသနာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ အမျိုးမျိုးတွေ ဆောင်ရွက်ကြတာရှိတယ်။ သားကဒါကို မကြိုက်ဘူး။ သားက ဘာဝါသနာကိုပါ မှန်းကိုမသိတာပဲ ရှိသေးတယ်။ ၀ါသနာပါမှန်း မသိတဲ့ဟာကို ကိုယ့်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ ကိုရှာရင်းနဲ့ ဂိမ်းတွေဆော့လာကြတယ်။ ဂိမ်းတွေဆော့လာတော့ ဂိမ်းတွေထဲမှာလည်း ပျော်ပြီးတော့ ၀ါသနာက ဂိမ်းဆိုတာလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ၀ါသနာက ဂိမ်းပါဆိုရင် သူတို့ဘ၀လည်း ဂိမ်းသွားမှာပေါ့။ ဒါကတော့ အစ်မမြင်တာပေါ့နော်။ အစ်မဆိုရင် လုံးဝဂိမ်းမဆော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့မဆော့လဲဆိုတော့ ဘာမှလည်း မကြိုက်ဘူး။ အစ်မ ၀ါသနာပါအောင်လည်း မလုပ်ဘူး။ ၀ါသနာပါအောင်လည်း လုပ်လို့ရတယ်။ အစ်မ Candy Crush ဆိုတဲ့ ဂိမ်းလားမသိဘူး ဆော့ကြည့်တယ်။ သူ့ Level တစ်ခုတက်ဖို့ စိတ်ဆိုးနေရတာနဲ့တင် အစ်မ မတန်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမြဲတမ်းမေးလေ့ရှိတယ်၊ ဒါငါဘာအတွက် လုပ်နေတာလဲပေါ့။ လူငယ်တွေမှာကျတော့ ဂိမ်းက သူတို့ရဲ့ အလုပ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ တချို့မိဘတွေလိုပဲ အစ်မလည်း လေ့လာရတာပေါ့နော်။ အစ်မလည်း သားသမီးတွေရှိတော့၊ အိမ်ထဲနေရင် ပျော်နေတာ။ Ipad တစ်လုံးနဲ့ Game စက်တစ်လုံးနဲ့ ၀ယ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် သားသမီးတွေက လိမ္မာတယ်လို့ပဲ ထင်နေတာ။ အဲဒီဟာ ပိုစွဲပြီးတော့ အခန်းထဲကကို မထွက်ကြတော့ဘူး။ အခန်းထဲကမထွက်တော့ ထမင်းကို အခန်းထဲထိဝင်ပြီး ကျွေးရတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်။ သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်ကြီးက ဘာကြီးမှန်းလဲ မသိဘူး။ ဘာကြီးမှန်းလဲမသိတဲ့ အိပ်မက်ကို အစ်မက ပြောပြချင်တာပေါ့။ အခုအစ်မ အဖေတို့အမေတို့က လုပ်ငန်းလုပ်တော့ အစ်မစာဖတ် စရာမလိုဘူး။ အစ်မသိချင်ရင် အဖေ့ကို မေးလို့ရတယ်။ အစ်မ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို စာဖတ်အရမ်းပျင်းတာ။
စာဖတ်တာဝါသနာလည်း မပါဘူး။ အရုပ်လည်း မပါဘူး။ ပျင်းတယ်။ အရုပ်ပါတဲ့ ကာတွန်းလေးတွေပဲ ကြိုက်တယ်။ အစ်မဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကို အဖေ့ကိုပေးလိုက်တယ်။ အဖေဖတ်ပေး နက်ဖြန်ကျတော့ အဖေ့ကိုမေးလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ မြန်မြန်လည်း ပြီးတယ်လေ။ အစ်မကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေ ၀ယ်ထားပေးပြီးတော့ အဖေ့ကိုပေးတယ်။ ပြောချင်တာက ၀ါသနာမပါတဲ့အလုပ်က လုပ်ရင်းနဲ့ဝါသနာ ပါသွားတယ်။ အစ်မ၀ါသနာပါတဲ့အလုပ်ဆိုရင် ဒီထက်အောင်မြင်မလား။ အစ်မနဲ့က ဒီအလုပ်က ကိုက်တယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် အစ်မ ခွန်အားကကျတော့ ကာတွန်းလေးတစ်ခုမှာ ပြောသလိုပဲ ရထားလမ်းကိုပြင်တယ်။ လူတစ်ယောက်တည်းပြင်တာနဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုပြင်တာနဲ့ ပြီးတဲ့အချိန်ချင်း၊ ရတဲ့ ရလဒ်ချင်းက မတူဘူး။ အစ်မတို့ကကျတော့ လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ လမ်းကြောင်းလေးကို ထိန်းထိန်းပေးတယ်။ အစ်မတို့ အပြစ်ပြောခံရတာတစ်ခုက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အပြစ်ပြောခံရရင် ကိုယ့်ကို ဓားသွေးစက်လိုပဲ များများသွေးပေးနေတာ။ အစ်မဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင် အပြောခံရလဲဆိုတော့ အစ်မတို့ အောင်သမာဓိ အလျော့တွက် တစ်ပဲယူတဲ့ခေတ်မှာ အလျော့တွက်ဆိုတာ လက်ခပေါ့နော်။ ၆၀၀၀၀ ယူတဲ့ ခေတ်မှာ အစ်မတို့ဆိုင်က ၅၀၀ နဲ့ပဲယူပြီး ရောင်းပေးတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာအပြောခံရလဲဆိုတော့ အောင်သမာဓိရွှေက မစစ်ဘူးလို့ အပြောခံရတယ်။ ပြီးရင်အစ်မ စိန်လုပ်တာ အသက်ငယ်တယ်။ စိန်ကိုထပ်ပြီးတော့ ပညာသင်တယ်။ အသက်ကလည်း ၁၇ နှစ်မှာလုပ် တော့ သူတို့စိန်တွေက မစစ်ဘူးလို့အပြောခံရတယ်။ အဲဒီတော့ အစ်မ အရမ်းနာကြည်းတယ်။ အဲဒီလို အပြစ်ပြောခံရတဲ့ နာကြည်းချက်ကို ခွန်အားအဖြစ် ပြောင်းပြီးတော့မှ လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ အဲဒီအခါကျမှ မိဘလုပ်ငန်းလုပ်တော့ ပေါင်းပြီးတော့ သွားလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုအခက်အခဲရှိတာက ရှေးရိုးစွဲကို ထိုးဖောက်ဖို့အတွက်ကတော့ ခက်တယ်။ ငါသိပြီးသား ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့။ ငါတို့စာအုပ်နဲ့မှတ်တာကွာ အရင်ကတည်းက ရှေးရိုးစဉ်ကတည်းက လုပ်ခဲ့တာ။ ညည်းခေတ်ကျမှ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပြောင်းရမှာလား။ အဲဒါကကျတော့ ခက်သွားပြန်ရော။ အဲဒီအခါကျတော့ ပူးပေါင်းပြီး ညှိနှိုင်းရမယ်။ အမေ့ကို ချော့ပေါင်းရမယ်။ အဖေ့ကို ချော့ပေါင်းရမယ်။ အစ်မတို့ ဖြစ်နေတာ ဘာတွေလဲဆိုတော့ သားသမီးတွေက ဗျောဗျောဗျဗျနဲ့ ပြောလိုက်တယ်။ နားလည်အောင်မပြောဘူး။ သူတို့ပြောချင်တဲ့စကားလုံးကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျရင်ပြောတယ်။ မိဘတွေနဲ့ကျရင် လိုတိုရှင်းလောက်ပဲ ပြောပြတယ်။ ပြီးရင် နားမလည်ဘူးဆိုတာ ရှိကြတယ်။ သူတို့ခင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်။ မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်။ ကိုယ့်အဖေအမေတွေ တစ်ခါတလေ သားသမီးတွေကို ဆုံးမလို့ မရတာ မဟုတ်ဘူး။ အဖေအမေတွေကကို ပြောလို့မရတာ ရှိတယ်။ အဲခါကျတော့ အဖေအမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကို မေးပြီးတော့ အကြံလေးပေး။ သားကတော့ ဒီလိုလေးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကြားခံလေးနဲ့ လုပ်ရင်တော့ အောင်မြင်ပါတယ်။ ၀ါသနာအရတော့ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ ၀ါသနာပါသွားတယ်။ အစ်မဒီလိုမျိုးလေးတွေ၊ နူးနူးညံ့ညံ့လေးတွေ လုပ်ရတာ သဘောကျတယ်။ ကြိုက်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်တယ်။ အခု အစ်မရဲ့ ၀ါသနာက ဈေးရောင်းရတာ ဖြစ်သွားတယ်။ ပိုက်ဆံရတာ ဖြစ်သွားတယ်။ အဓိက,က နောက်ဆုံးတော့လည်း အားလုံးက ပိုက်ဆံကိုရှာကြတာပဲလေ။ ပိုက်ဆံရှာတဲ့နေရာမှာ အဓိက,က စေတနာရှိဖို့၊ မှန်ကန်ဖို့၊ ပြီးတော့ အစ်မတို့က အောင်သမာဓိဆိုတော့ အစ်မအဖေကလည်း သမာဓိရှိစွာနဲ့ လုပ်ရပါတယ်။ အစ်မတို့လုပ်ငန်းတွေမှာကျတော့လည်း ယုံကြည်မှုကို ရောင်းရတာ။ အစ်မတို့ဆီက ဈေးဝယ်သူတွေကို ဒီရွှေဈေးဆိုရင် ဒီရွှေကိုပေးရတယ်။ သူက မီးလင်းဝယ်ရင် မီးလင်းကို ပေးရမယ်။ ၁၅ ပဲ ဆိုရင် ၁၅ ပဲကို ပေးရတယ်။ မီးလင်းဝယ်ပြီး ၁၅ ပဲရွယ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် အစ်မတို့က ဈေးဝယ်သူကို ညာရောင်းတာနဲ့တူတူပဲ။ အဲဒီတော့ အစ်မတို့ အဲဒီလိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် သမာဓိရှိရမယ်။ မှန်ကန်ရမယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် ယုံကြည်မှုရှိအောင် လုပ်ရမယ်။ ရေရှည်သွားနိုင်အောင် လုပ်ရပါမယ်။ အဲဒီတော့ အစ်မအနေနဲ့ မိဘလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာ အစ်မ ဥပမာပြသလိုပဲ အသီးကို အဆင်သင့်စားလို့ရတယ်။ အများကြီးထပ်ပြီးတော့ တစ်ပင်ကနေနှစ်ပင်၊ နှစ်ပင်ကနေ သုံးပင်ကူးလို့ရတယ်။ အစ်မနားမလည်ရင် အစ်မတစ်ယောက်တည်း ခေါင်းခြောက်စရာ မလိုတော့ဘူး။ အဖေအမေ ကူညီလို့ရတယ်။ တစ်ယောက်တည်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့ တစ်ယောက်တည်း လုပ်ရတယ်။ တစ်ယောက်တည်း စိတ်ညစ်ရတယ်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ဘာမှဝိုင်း မကူနိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်တဲ့ အတွက် အစ်မလက်ရှိအနေအထားကို အစ်မကျေနပ်တယ်။ နောင်တလည်း မရဘူး။ အစ်မအတိတ်ကိုလည်း ပြန်မတွေးဘူး။ အနာဂတ်ကိုလည်း သိပ်မမျှော်လင့်ဘူး။ ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲ အစ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရင်းပေါ်ကိုပဲ ကြည့်ပြီးတော့ အစ်မအကျိုးကိုပဲ အဓိကမျှော်လင့်ပါတယ်။ အကြောင်းကောင်းမှလည်း အကျိုးကကောင်းမှာဆိုတော့ သိပ်ပြီးတော့ အိပ်မက်တွေလည်း အများကြီးမမက်ပါနဲ့။ ဒါပေမဲ့ မက်တဲ့အိပ်မက်တွေကလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အိပ်မက်တွေကို မက်ပြီးတော့မှ ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပါလို့ အစ်မ ပြောချင်ပါတယ်။
Eleven Media Group မှ လစဉ်ပြုလုပ်သည့် Youth Inspire Talk အစီအစဉ်အား Eleven Media Group Facebook Page နှင့် Eleven Broadcasting Facebook များတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted in InterviewsTagged Youth Inspire TalkLeaveaComment on Youth Inspire Talk
မြန်မာ ယူ-၂၃ ဂိုးသမား ကျော်ဇင်ထက်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
‘ဆော်ဒီနဲ့ပွဲမှာ အမှတ်ရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်’
မြောက်ကိုရီးယားအသင်းနဲ့ သရေကျခဲ့တဲ့ အုပ်စုအဖွင့်ပွဲမှာ မြန်မာအသင်းအတွက် အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သူက ဂိုးသမား ကျော်ဇင်ထက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ဇင်ထက်ဟာ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပွဲမှာ သေချာပေါက်ဂိုးသွင်းခွင့် ငါးကြိမ်ထက်မနည်း ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျော်ဇင်ထက်ကို ဆော်ဒီအသင်းနဲ့ကစားမယ့် အုပ်စုဒုတိယပွဲမတိုင်ခင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
■မေး – မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပွဲမှာ သေချာပေါက်ဂိုးသွင်းခွင့်တွေကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့လို့ အဲဒီပွဲက လက်စွမ်းအပေါ် အားရကျေနပ်မှု ရှိပါသလား။
■ ဖြေ – မြန်မာ ယူ-၂၃ အသင်း ရလဒ်ကောင်းဖို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားလိုအသင်းမျိုးကို သရေကစားနိုင်ခဲ့တာက အသင်းသားအားလုံးရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးအသင်းဆိုတာ တစ်ဦးကောင်း၊ တစ်ယောက်ကောင်းနဲ့ ကစားလို့မရပါဘူး။ အသင်းသားအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိမှ အသင်းကောင်းတစ်သင်း ဖြစ်မှာပါ။
■ မေး – ပွဲမတိုင်ခင်မှာ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပွဲအတွက် ဘယ်လောက်အထိ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသလဲ။
■ ဖြေ – ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့အုပ်စုက အသင်းကြီးတွေပါပဲ။ ဒါကြောင့် ပြင်ဆင်မှုတွေ သေချာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နည်းပြကြီးအနေနဲ့လည်း အသင်းတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ သေချာပြောပြပါတယ်။ နည်းပြသင်ကြားတဲ့အတိုင်း ကစားနိုင်လို့ ရလဒ်ကောင်း ရခဲ့တာပါ။ ပြိုင်ဘက်တွေက အာရှအင်အားကြီး အသင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် လျင်မြန်မှုနဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုကို ဦးစားပေးပြီး ကစားတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အမြင့်ဘောတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အမှတ်ရခဲ့တာပါ။
■ မေး – ဒုတိယပွဲဖြစ်တဲ့ ဆော်ဒီအသင်းနဲ့ပွဲမှာရော ရလဒ်ကောင်းရယူနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလား။
■ ဖြေ – မြန်မာအသင်းဆိုတာ ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ကွာခြားပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ခြေစွမ်းကွာဟမှုက ကျွန်တော်တို့အတွက် အခွင့်အရေးကောင်းဖြစ်လာတာပါ။ ဆော်ဒီအသင်းနဲ့ပွဲမှာလည်း အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှာပါ။ အမှတ်ရဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
■ မေး – မြောက်ကိုရီးယားအသင်းကို သရေကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိလာပြီလား။
■ ဖြေ – အုပ်စုကျပ်ထဲ ကျရောက်နေပေမဲ့ တတိယနေရာရ ခြောက်သင်းထဲမှာ လေးသင်းက နောက်တစ်ဆင့်တက်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှာပါ။ လက်ကျန်နှစ်ပွဲမှာ တစ်ပွဲနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ အသင်းသားအားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ကစားရင် ရလဒ်ကောင်းတွေ ရလာမှာပါ။
Posted in InterviewsTagged ကျော်ဇင်ထက်LeaveaComment on မြန်မာ ယူ-၂၃ ဂိုးသမား ကျော်ဇင်ထက်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်မှူးကြီးကပ္ပတိန် မြင့်ဇော်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted on August 8, 2018 August 9, 2018 by ရွှန်းလဲ့ဝင်း
‘ကျွန်တော်ပျံသန်းရမှာက ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာ။ မုန်တိုင်းလည်း ရှိတယ်။ ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားရင် ရိုးမထဲမှာ။ ဘယ်လိုမှ အရေးပေါ်ဆင်းသက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး’
ဇူလိုင် ၂၀ ရက်က စစ်တွေမှ ရန်ကုန်သို့ ပျံသန်းလာသည့် Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းမှ ATR လေယာဉ်တစ်စင်းသည် Electrical Heating System ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် လေယာဉ်မှန်ကွဲအက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် အဆိုပါ လေယာဉ်အား မောင်းနှင်လာသည့် လေယာဉ်မှူးကြီးမှ သံတွဲလေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့ သံတွဲလေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်ခဲ့သည့် လေယာဉ်မှူးကို Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းမှ ရာထူးတစ်ဆင့်လျှော့ အရေးယူ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို့ ရာထူးတစ်ဆင့်လျှော့ အရေးယူ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းသည် လေကြောင်းလိုင်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အားကျော်လွန်၍ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် လေယာဉ်မှူးကြီးအား မူလရာထူးသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူများကို သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့က ခေါ်ယူကာ ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်မှူးကြီး ကပ္ပတိန်မြင့်ဇော်ဦးအား သြဂုတ် ၇ ရက်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်များအား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
■ မေး – အဲဒီနေ့က ဖြစ်စဉ်လေးကို အရင်ဆုံး ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ – ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်စစ်တွေကနေ ရန်ကုန်ကို ပြန်လာတာပေါ့။ ခရီးစဉ်က ရန်ကုန်-သံတွဲ-စစ်တွေ-ရန်ကုန် ခရီးစဉ် K7422၊ K7423 ပေါ့။ အမြင့်ပေ ၁၇၀၀၀ မှာ ပျံနေတဲ့အချိန်ပေါ့။ သံတွဲရောက်ဖို့ ၄၅ မိုင် အလိုမှာ Heating System ပျက်သွားတာ။ Wind Shield မှာ နည်းပညာအရ လေယာဉ်မှန်မကွဲအောင် အပူပေးတဲ့စနစ်ရှိတယ်။ အဲဒါမကောင်းလို့ ပျက်သွားတာ။ ပျက်သွားတော့ အဲဒီအချိန်မှာ Fault Alarm မြည်လာတယ်။ အဲဒီလို မြည်လာရင် ဘာလုပ်ပါဆိုတာ အလိုအလျောက် ညွှန်ကြားတဲ့ Check List ရှိပြီးသား။ နားလည်အောင်ပြောရရင် ဒီ System မှာ Shock ဖြစ်နေတယ်။ မကောင်းဘူးပိတ်ပါလို့ ပြောတဲ့ Auto Procedure ရှိတယ်။ အဲဒီလို အပူပေးစနစ် ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက် ဒီ System မကောင်းတော့လို့ မှန်ကအေးပြီး ကွဲသွားတာပေ့ါ။ ဒါကဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ သဘောတစ်ခုပါ။
■ မေး – ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီလိုမှန်ကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာ ကပ္ပတိန် ဘာဆက်လုပ်ခဲ့ပါသလဲ။
ဖြေ – ဟုတ်ကဲ့ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ လေယာဉ်မှူးတစ်ယောက် အနေနဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမှာက လေယာဉ်က မှန်ကွဲသွားပြီ။ ကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာ ဒီဖြစ်စဉ်က impact ဖြစ်နိုင်သလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ impact ဖြစ်တယ် ဆိုတာက ထိခိုက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပြီးတော့ ဒီလေယာဉ်က စိတ်ချရတဲ့ အနေအထားမှာ မရှိတော့ဘူး။ အရေးပေါ် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ရောက်သွားပြီ။ ဒါကတစ်ချက်ပေါ့။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဒီလိုမှန်ကွဲပေမယ့် ဆက်မောင်းလို့ရသေးတယ်။ လေယာဉ်ပျံသန်းမှုကို ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ဘူး။ စိတ်ချရတယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒီလိုမှန်ကွဲတာမျိုးက Creck ဖြစ်တယ်လို့ ခေါ်တယ်။ Creck ဖြစ်လာလို့ရှိရင် အစင်းကြောင်း တစ်ကြောင်းတည်းကို အလွန်ဆုံးက လေးလက်မအထိပဲ Limitation ရှိတယ်လို့ အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ Maual မှာပါတယ်။ လေးလက်မကျော်သွားရင်တော့ တပြင်လုံးကွဲသွားပြီ။ အဲဒါဆိုရင် ဒီလေယာဉ်က အရေးပေါ် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို အချိန်မရွေး ရောက်သွားနိုင်တယ်။ ဒီမှန်ကြီးပြုတ်ထွက်သွားမလား မပြုတ်ထွက်သွားဘူးလားဆိုတာ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ဘူး။ အခုလို ကွဲနေရက်နဲ့ ဆက်မောင်းလာရင် ဒီမှန်ကလုံးဝ မပြုတ်ထွက်ပါဘူး။ အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်လို့ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေမရှိဘူး။ ဘယ်သူမှ အာမမခံနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ မှန်ကွဲသွားရင် အရေးပေါ် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အစီအစဉ်တွေ ရှိတယ်။ နားလည်အောင်ပြောရရင် ဒီလေယာဉ်သည် ဆက်လက်ပျံသန်းဖို့ စိတ်ချရတဲ့ အနေအထားမှာ လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ အချိန်မရွေး မှန်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်။ အနီးစပ်ဆုံးကွင်းမှာ ဆင်းသက်ရမယ်။ ဒါကလည်း Electrical System Failed ဖြစ်လို့ နောက်တစ်ခုကို ထပ်မကူးဘူးလို့လည်း မပြောနိုင်ဘူး။ ခုအရင်ဆုံးကွဲတဲ့မှန်က ကျွန်တော့်ဘက်ကမှန်။ ပြီးရင် တွဲဘက်လေယာဉ်မှူးဘက်က မှန်လည်း ထပ်မကွဲဘူးလို့ ဘယ်သူမှ အာမမခံနိုင်ဘူး။ မှန်နှစ်ဘက်လုံး ကွဲသွားခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီလေယာဉ်ကို ဆက်မောင်းဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ ရာသီဥတုကလည်း အရမ်းဆိုးနေတယ်။ လျှပ်စီးတွေလက်၊ လေပြင်းတွေတိုက်၊ မိုးကြိုးတွေပစ်နေပြီး မုန်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ရာသီဥတုပါ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရရင် ဒါသည် ပုံမှန်အခြေအနေ Normal Flight မဟုတ်တော့ဘူး။ Abnormal Flight ဖြစ်သွားပြီ။ အချိန်မရွေး အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒီအခြေအနေမှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ လိုက်ပါလာတဲ့ ခရီးသည်တွေရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရမယ်။ နောက်တစ်ခုက လေယာဉ်အမှုထမ်းတွေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး လေယာဉ်ကို ဒိထက်ပိုပြီး မပျက်စီးအောင် မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရမှာ ကျွန်တော့်တာဝန်။ မှန်အကွဲကြီးနဲ့ ဆက်ပျံဖို့က အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ ကျွန်တော်ပျံသန်းရမှာက ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာ။ မုန်တိုင်းလည်းရှိတယ်။ ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားရင် ရိုးမထဲမှာ။ ဘယ်လိုမှ အရေးပေါ် ဆင်းသက်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ နောက်တစ်ချက်က သံတွဲကို မဆင်းဘဲဖြစ်တဲ့ နေရာကနေ ရန်ကုန်အထိ မောင်းမယ်ဆိုရင် ၁ နာရီနဲ့မိနစ် ၂၀ လောက် မောင်းရမယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်သံတွဲကိုဆင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းဆင်းလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ လုပ်ရမယ့် အစီအစဉ်တွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်သံတွဲလေဆိပ်ကို လေယာဉ်ဆင်းဖို့ ဆက်သွယ်ရတယ်။ Weather တောင်းရတယ်။ ပြီးတော့ ခရီးသည်တွေကို လက်ရှိအခြေအနေကို ကြေညာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်ကို ဆက်မသွားတော့ဘူး။ သံတွဲ လေဆိပ်ကိုဆင်းပါ့မယ်။ လေယာဉ်ကလည်း Capt ရဲ့ Under Control အောက်မှာပဲ ရှိပါတယ်။ သံတွဲကိုရောက်ရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ Ground Staff တွေက အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ပေးပါ့မယ်ဆိုတာ ကြေညာပြီးမှ သံတွဲလေဆိပ်ကို ဆင်းခဲ့တာပါ။ ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်း ခက်ခက်ခဲခဲ ဆင်းခဲ့ရတယ်။ မိုးထဲလေထဲမှာ ဆင်းခဲ့ရပြီး မြေပြင်မှာ တစ်နာရီ မိုင် ၃၀ နှုန်းနဲ့ လေက တိုက်နေတာ။ ကျွန်တော့်ဘက်က မှန်ကွဲနေတဲ့အတွက် မြင်ကွင်းမရှင်းလို့ တွဲဘက်လေယာဉ်မှူး အကူအညီယူပြီး ဆင်းခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်ဆင်းခဲ့ချိန်မှာ ခရီးသည်နဲ့ လေယာဉ်ဘာတစ်ခုမှ ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘဲ Safety Landing ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
■ မေး – ဟုတ်ကဲ့ စစ်တွေကနေ တက်လာပြီးမှ စစ်တွေလေဆိပ်ကို ပြန်မဆင်းဘဲ သံတွဲလေဆိပ်ကိုဆင်းဖို့ ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော်စစ်တွေကို ဘာလို့ ပြန်မဆင်းသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် စစ်တွေကနေ စတက်လာတည်းက စစ်တွေမှာလည်း ရာသီဥတုက မကောင်းဘူး။ မိုးရွာနေတယ်။ မိုးတိမ်တောင်တွေ ရှိနေတယ်။ ကျွန်တော်က သံတွဲကို မဆင်းဘဲ စစ်တွေကို ပြန်လှည့်ပျံမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့ ပုံမှန် Speed အတိုင်း ပျံလို့မရတော့ဘူး။ မှန်ကွဲနေလို့ ကျွန်တော် Speed လျှော့ပျံမှ ရတော့မယ်။ ဒါကြောင့် စစ်တွေကို ပြန်လှည့်ရင် ၂၅ မိနစ်လောက် ဖြစ်သွားပြီ။ စစ်တွေကို သွားပြီးမှ မဆင်းနိုင်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်သံတွဲကို ပြန်လှည့်လာလို့ မရတော့ဘူး။ ဘာလို့သံတွဲလေဆိပ်မှာ ညဘက်ဆင်းဖို့ Night Landing Facilities မရှိဘူး။ ညနေ ၅ နာရီအထိပဲ ဆင်းလို့ရတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရာသီဥတုဆိုးနေလို့ စစ်တွေကို ဆင်းလို့မရတော့ဘူး။ သံတွဲမှာလည်း မဆင်းဘဲ ရန်ကုန်အထိ လာမယ်ဆိုရင် ဒီရာသီဥတု ဆိုးဆိုးကြီးကြီးထဲမှာ ခရီးသည်တွေကို တောက်လျှောက် ခေါ်သွားဖို့ဆိုတာ အန္တရာယ်ကြားမှာ Over Risk ယူပြီး သွားရသလိုဖြစ်မယ်။ ရန်ကုန်ကို ရောက်ခဲ့ရင် ပြောတာနော်။ တကယ်လို့ လမ်းမှာဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘဲ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ရင်တောင် ကျွန်တော့်ကို သက်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက အရေးယူမှာ အသေချာပဲ။ ခရီးသည်တွေရဲ့ Safety ကို မစဉ်းစားဘဲ ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ မောင်းလာတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို DCA က လိုင်စင်သိမ်းတဲ့အထိ အရေးယူနိုင်ပါတယ်။
■ မေး – ဟုတ်ကဲ့ လေယာဉ်မှူးတစ်ယောက် အနေနဲ့ အခုလို မထင်မှတ်တဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစား လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့ လေယာဉ်မှူးတွေအနေနဲ့ကတော့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ မထင်မှတ်တဲ့ အခြေအနေတွေ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ သတ်မှတ်ထားပြီးသား Standard Operating Procedure (SOP) တွေအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးက ခရီးသည်တွေရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ဖြစ်တာကြောင့် ဒီအချက်ကို ဦးစားပေးရင် လေကြောင်းလိုင်းရဲ့ စီးပွားရေးကို အနည်းနဲ့ အများထိခိုက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်ခုကြားမှာ လေယာဉ်မှူးတွေရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပဲ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
■ မေး – Capt ဘက်ကအခုလိုဆုံးဖြတ်ပြီး သံတွဲလေဆိပ်ကို ဆင်းသက်ခဲ့တာကို လေကြောင်းလိုင်းက အရေးယူမှု ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ် ဘာများပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ – ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသလိုပါပဲ။ လေယာဉ်လေထဲမှာ မောင်းနေတဲ့ အချိန်ကနေ မြေပြင်ရောက်တဲ့အထိ SOP ကို မလိုက်နာဘဲ လုပ်ခဲ့တာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ခရီးသည်တွေရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် ဒီလိုအရေးယူမှုကတော့ အများကြီး နစ်နာပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Posted in InterviewsTagged Air KBZ လေကြောင်းလိုင်း, လေယာဉ်မှူးကြီးကပ္ပတိန်LeaveaComment on Air KBZ လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်မှူးကြီးကပ္ပတိန် မြင့်ဇော်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း